တျောတျောကဲတဲ့ မျောဒယျဂဲလျ – My Blog
တျောတျောကဲတဲ့ မျောဒယျဂဲလျ (စ/ဆုံး)
နောငျလတျ ပါးစပျကွီး ခါးလညျကို ဖွတျနငျးခံလိုကျရသော ကြျောစံကေး ပါးစပျနှယျ ပွဲသှား၏။ “အားပါး …. အောကျစလှတျနေ တာကှ..အဟီး” ထိနျဝငျးနှငျ့ သနျးရှိနျတို့နှဈယောကျ .. သံပတျပေးထားသော စကျရုပျမြားနှယျ လှုပျစိ လှုပျစိ လမျးလြောကျနရော မှ.. နဖားကွိုးအဆှဲခံလိုကျရသလို.. တုံ့သှားသညျ။ ခြာကနဲ ခေါငျးနှဈလုံးက နောငျလတျကွညျ့ရာသို့ လိုကျကွညျ့ ကွသညျ။ ထိနျဝငျး က .. ဟိုကျ ကနဲ အျော၏။ သနျးရှိနျက မကျြကွီးပွူးပွီး…ဂလု ကနဲ တံတှေး မွိုခြ၏။ “ပျေါတငျကွီး..” သုံးယောကျသား ..လမျးမ အလယျမှာ တနျးစီရပျနမေိကွသညျ။ နှဈထပျ ပဉျြထောငျအိမျကလေးက သားနားသပျ ရပျသညျ။ ပွူတငျးပေါကျမြားကို ကွညျပွာရောငျ ဇာလေးမြား ခြိနျဆှဲထားသညျ။ အိမျရှနှေ့ငျ့ လူသှားလမျးကလေး တဈခုမြှသာ ဝေးပွီး ခွံကကဉျြးမွောငျးသညျ။ ခေါငျးရငျးဘကျ၌ ရစေငျတဈခု ရှိ၏။ ရစေငျအောကျ ကွိမျကုလား ထိုငျလေးပျေါ၌ လှပ ကြော့ရှငျး ပွပွေဈ နုထှား အားပါးပါးကွီး တဈယောကျက ဒူးနှဈဖကျ ပူးထပျကာ စာဖတျနေ သညျ။ ပူးထပျထားသော ညာပေါငျရငျးအထိ ထမီလေးက ဟောငျးလောငျး..။ ဖွူ ဖှေးဥနသေော အတှငျးသား အစိုငျအခဲကွီးမြားကို သုံးယောကျသား အမဲသားသညျ ဘေး၌ထိုငျနသေော ခှေးမကျြလုံးမြိုးဖွငျ့ ဝငျး လကျစှာကွညျ့ နကွေ၏။
“ပှမျ…ပှမျ..” “စောကျပတျကွီး ..” ထိနျဝငျးက ယောငျလငျြ ..အဲဒါကွီး အမွဲထညျ့ယောငျသညျ။ ယခုလညျး အနားကပျတီးလိုကျ သော ဟှနျးသံကွောငျ့ ထိနျဝငျးက ယောငျလိုကျမိ၏။ နောငျလတျနှငျ့ သနျးရှိနျကွားသို့ ကားဦးက တိုးဝငျလာသညျ။ ပွီး..ဟှနျးကို ထပျတီး လိုကျပွနျသညျ။ “ပှမျ..ပှမျ..” “စောကျပတျကွီး..” ထိနျဝငျးကလညျး ဝတ်တရားမပကျြ ယောငျပွနျသညျ။ နောငျလတျက ဝရုနျးသုနျးကား ဖွဈနသေော ထိနျဝငျးကို လှမျးဆှဲသညျ။ ဆှဲမိသညျက ပုဆိုးခပုံစဖွဈနလေရော ပုဆိုးစကွီစက နောငျလတျလကျထဲ ပါလာသညျ။ အောကျခံ ဘောငျးဘီ ဝတျလမေ့ရှိသော ထိနျဝငျး၏ မဲနကျမှောငျမှောငျ ဦးစှနျးဖုတျကွီးလို မဲကနဲ ပျေါသှား၏။ လ မှေးမြား အောကျ၌ ငုတျတိတိ သေးကှေးလှသော ခလေးလီးသာသာလေးကပါ ဘှားကနဲ မွငျကှငျးထဲ ဝငျလာ၏။
“ဟာ …စောကျပတျကွီး..” သညျတဈခါ သနျးရှိနျကလနျ့ပွီး ထခုနျသညျ။ ထိနျဝငျး ပုဆိုးစကို အတငျပွနျလုပွီး မကျြနာကွီးနီရဲလာ ကာ သနျးရှိနျကို ဒေါသနှငျ့အျောသညျ။ “ဘာလို့ ဇှတျအျောနတောလဲ .. စောကျပတျမှနျး မသိ လီးမှနျး မသိ…တောကျ..” အမှနျက ထိနျဝငျး ရှကျရမျးရမျးခွငျးသာ ဖွဈသညျ။ ကားရှတေ့ညျ့တညျ့၌ မကျြစိနောကျစရာ ရှုပျထှေးနသေော သူ တို့သုံးယောကျကို ကား မောငျးလာသူက စိတျမရှညျဟနျဖွငျ့ ဟှနျးထပျတီးလိုကျပွနျသညျ။ “ပှမျ..ပှမျ” “စောကျ…အဲ..အဲ..” ထိနျဝငျး ယောငျမညျဟု ပါးစပျ ပွငျပွီးကာမှ ကားထဲကထှကျလာသော မိနျးကလေးမကျြနာကွောငျ့ အားနာပွီး မ ယောငျဖွဈတော့။ “လမျးလယျခေါငျမှာ ဘာလုပျ နကွေတာလဲ” “ကွညျ့နတော..ဟဲ..ဟဲ..” “ဘာကွညျ့တာလဲ…ဟှနျး..” “ဟိုမှာ..အောကျစလှတျနတောကို..” “ဘာ…ဘာ ပွော တယျ” ခွံကဉျြးလေးထဲမှ ထှကျလာသော မခြောက စာအုပျကို လကျညိုးလေးညှပျကိုငျရငျး ဝငျမေးလိုကျသညျ။ ထိနျဝငျး လကျညိုး ကွီးက အလိုလိုနရေငျး သနျးရှိနျနှာခေါငျးကို ထိုးမိသှားသညျ။ ကားလေးထဲမှ နောကျထပျ မိနျးကလေး တဈဦး ထပျဆငျးလာ ပွနျသညျ။
“ဘယျက တောသားတှလေဲ မသိဘူး..” “မိုးညိုဘကျကပါ…သိလို့လား.. ဟငျ” “ရှငျ့ကို ဘယျသူက မေးနလေို့လဲ…ဘာမှနျးလဲမသိ ဘူး.. ဂယောငျတှေ..” နောငျလတျက အခွအေနကေို ဝငျထိနျးရနျ ကွိုးစားသညျ။ “ဒီလိုပါ.. အဟဲ.. ဒီလိုလေ..” “လာပွနျပွီ..တဈ ယောကျ.. အကုနျလုံးအရူးထောငျက ထှကျလာတာမြားလား.. မသိဘူး.. ကိုညို ကြေးဇူး..” ကားဒရိုငျဘာကို လကျကလေးပွပွီး သုံး ယောကျသား ခွံဝငျးထဲ ဝငျသှားကွ၏။ ရယျကြဲကြဲလုပျထားသော နောငျ လတျပါးနှဈဖကျ တငျးကနဲဖွဈသှားသညျ။ “ပှမျ..ပှမျ..” “စောကျပတျကွီး…ဟာ..သှားစမျးဗြာ..မွနျမွနျ” ထိနျဝငျး လနျ့ယောငျပွီးမှ ကားဒရိုငျဘာကို အျောလိုကျ၏။ ဒရိုငျဘာကွီးက ..ပှမျ ကနဲ တဈခကျြထပျနှိပျလိုကျပွီး.. “မငျးယောငျတာ ..နားထောငျကောငျးလို့ပါ.. ဟား.. ဟား..ဟား….ဟား…” “တောကျ…အရေးထဲ” ကားမောငျးထှကျသှားသညျ။ နောငျလတျက အိမျအပျေါထပျသို့တနျးစီတကျသှားသော.. ဖငျဝိုငျးဝိုငျးလေးမြားကို အသအေခြာလိုကျကွညျ့ရငျး သကျပွငျးခသြညျ။
“တျောတျော အပေါကျဆိုးတဲ့..ကောငျမတှေ..” “အေးကှ..အပေါကျဆိုးမယျထငျတယျ…အပေါကျ..” “ဘာအပေါကျလဲ…မငျ့ဟာ က” “စောကျပေါကျလကှော.. လုံခညျြကြှတျလို့ မကျြနာဘယျထားရမှနျး မသိရတဲ့အထဲ..” “ဟိုမှာ သှားထားပါလား..” “ဘယျမှာ တုနျး..” “အပေါငျ..ဆိုငျ..လေ..” နောငျလတျ ထိနျဝငျးနှငျ့ သနျးရှိနျတို့မှာ သကျတူရှယျတူ (20) ဝနျးကငျြ လူငယျမြားဖွဈကွသညျ။ နောငျလတျက ကမာရှတျဝပျရှော့တဈခုမှာ အလုပျလုပျရငျး ဝါသနာပါရာ ဂီတအနုပညာဘကျကို တိုးဝငျနသေူ ဖွဈသညျ။ ထိနျဝငျး က တှံတေးသား..မိဘပိုငျ မာလကာခွံတှကေို ဦးစီးလုပျကိုငျနရေငျး စာပလေောကကို လာနငျးနသေူ.. သနျးရှိနျက စီးပှားရေးသမား..အားလုံး..စုမိ..ဆုံမိကွသညျ။ အိမျတဈလုံးကို စုငှားကွသညျ။ နကွေသညျ။ စိတျတူကိုယျတူ အိပျ စားအတူ..သှား အတူ နောကျဖေးသှာလငျြသာ ကှဲပွားသှားကွသညျ။
နောငျလတျတို့သုံးယောကျ ..မကွာခဏ အလုပျပိတျရကျဆုံကွပွီး..ရုပျရှငျကွညျ့.. ကွေးအိုးသောကျ..တဈခါတဈလေ အပွာကား ကွညျ့.. ဘီယာသောကျ.. ယခုလညျး အပွာကားကွညျ့ပွီး ပွနျလာခွငျးဖွဈရာ အရှိနျမသသေေးခငျ အောကျစကလေး ပျေါနသေော မခြောလေးကို ငေးမိကွခွငျးဖွဈသညျ။ သညျရပျကှကျ၌ နောငျလတျတို့ နခေဲ့ကွသညျမှာ သုံးနှဈနီးပါးရှိလာပွီး သညျလမျးကို အကွိမျပေါငျးမြားစှာလညျး သှားလာခဲ့ဘူးကွသညျ။ သညျမခြောလေးမြားကို သညျ့နမှေ့ စတငျတှမေိ့ကွခွငျးအတှကျ သူတို့သုံး ယောကျ အံ့ သွောကွ၏။ နောငျလတျနှငျ့ထိနျဝငျးက သညျကိစ်စကို အလေးနကျ ဆှေးနှေး၏။
“အဆနျးတကယျြလုပျလို့ကှာ..မငျးတို့ကလဲ . ကြောငျးတှပွေနျဖှငျ့တော့.. နယျက ကြောငျးလာနကွေတာ ဖွဈမှာ ပေါ့ဟ..” သနျး ရှိနျတှေးသော အတှေးကို နောငျလတျနှငျ့ ထိနျဝငျးလုံးဝ မတှေးမိကွ…ပညာရှိ သနျရှိနျကို အထငျကွီးမိကွသညျ။ “သုံးရကျ အတှငျး..မှတျပုံတငျနံပတျနဲ့ မိဘ.. အမညျ.. အတနျး..နရေပျ..လိပျစာတှေ အတိအကြ ရစရေမယျ” အရှိနျရသှားသဖွငျ့ သနျးရှိနျက ဘယျသူမှ တာဝနျမပေးပဲ မဟာတာဝနျကွီးကို အလုအယကျ ယူသညျ။ ပွီးမှ လညျ ခြောငျးဝ၌ အရိုးကနျ့လနျ့ ခံနသေော မကျြနာကွီး ဖွငျ့… “ဟို…အဲ…တဈယောကျထဲတော့.. လှတျမထားနဲ့လေ” ဟု ဆို၏။ “ကဲ..ဒါဆို..ခှဲတမျးခမြယျ..” “ဘယျလို..ခှဲတမျးခမြှာလဲ ဟ..” ထိနျဝငျးက လြောကျနသေော ခွလှေမျးမြားကို ရပျလိုကျ၏။ ထူထဲသော မကျြခုနျးနှဈဖကျကို ကွုတျလကျြ စဉျးစား ဟနျပွုပွီး ခါးကို ထောကျလိုကျသညျ။
“ငါက…ကားပျေါက ပထမဆငျးလာတဲ့ ဟာမလေးကို အငျထရကျဈဖွဈတယျ..မငျးကရော နောငျလတျ..” “ဟို…စာဖတျ ရငျး..အောကျစလှတျနတေဲ့.. ဟာမလေးကှာ..” နောငျလတျ မဆိုငျးမတှ ဖွလေိုကျသညျ။ “အား..ဒါဆို…ဒုတိယ ကားပျေါကဆငျး လာတဲ့ …စကီလေးကှာ” “အေး..ဒါဆို..အဝမြှေတယျ..ဒီတော့.. ကိုယျ့ဆျောနာမညျ… ကိုယျ့ဖာသာစုံစမျးကွေး.. ဘယျ့နှယျ့လဲ” “အို…စိနျလိုကျ” စိနျလိုကျ ဟုအျောလိုကျသော ထိနျဝငျးနှငျ့ သနျးရှိနျအသံက အားရပါးရ ရှိသဖွငျ့ ကယျြလောငျသှားသညျ။သူတို့ အနောကျမှ အမဲရိုးတဈခြောငျးကို ကိုကျခြီလာသော ခှေးပငျ ကိနျ ကနဲ လနျ့အျောပွီး..ထှကျပွေးသညျ။ အမဲရိုးက ထိနျဝငျး ခွထေောကျနားတှငျ ကနျြရဈသညျ။
“လီးမှပဲ…ခှေးတောငျလနျ့ပွီး..အမဲရိုးကနျြခဲ့ပွီ..” “ဒါ…နောကျဆုံးထှကျတာ..အဈကိုရ.. မိနျးကလေးတှတေောငျ ငှားတယျ” “ဘာ စာအုပျလဲ…ပွစမျးပါဦး” “အခဈြခှဲတမျးလေ…ပီပွငျတယျ..” ထိနျဝငျးက စားအုပျအငှားဆိုငျလေးမှ ခြာတိတျလေး ထိုးပေးသော စာအုပျလေးကို ဟိုလှနျ .. ဒီလှနျလြောကျဖတျရငျး..မကျြလုံးပွူးပွ၏။ “ဟီး..ဟီး…မိုကျတယျဟ…အဟေး..ယူသှားမယျ” “တဈ ရကျပဲနျော ..အဈကို..”“အေးပါ…နောကျနေ့ အပွီးဖတျမှာပါ..” “ပွီးမှပဲ…လကျကခခြငျြတဲ့ စာအုပျဗြ…ရသ.. စာပထေဲမှာတော့ ..ဒီ စာရေးဆရာက.. သနျ့တယျ အဈကို.. ဗလာခြီ လြောကျရေးနတော မဟုတျဖူး.. ဖွဈရပျမှနျတှကေို ကြောရိုးယူထားတာ..ဗြ.” “အခဈြခှဲတမျး …ပွနျရောကျပလား..ဟငျ..” “သောကျပလုတျတုတျ..” ထိနျဝငျးက အလနျ့တကွား အျောရငျး လှညျ့ကွညျ့လိုကျ သညျ။ ထိနျဝငျး စိတျထဲ၌ ဟ… နောငျလတျ စျောလေး ဟု ရရှေတျလိုကျ၏။
“မ…မရောကျသေးဘူး..မမလေးရဲ့..” “ပွနျရောကျပွီးတာကို …နငျ..ထပျငှားလိုကျတယျ.. မှုတျလား” မခြောလေးက စှာပုံရ သညျ..ထိနျဝငျးလကျထဲက…စာအုပျပါးလေးကို ဘယျထားရမှနျးမသိအောငျ ဖွဈသှားသညျ။ “ငါ..လဈပွီ” ထိနျဝငျးက စာအုပျငှား သမားလေးကို မကျြစပွဈပွလိုကျပွီး.. အလငျြအမွနျထှကျလာခဲ့သညျ။ ဘာမဆိုငျ ညာမဆိုငျ သတငျးထူး တဈပုဒျရလိုကျသော ထိနျဝငျး ရငျတှခေုနျနသေညျ။ “နောငျလတျ…မငျးစျောလေးက…စာအုပျလာငှားတယျဗြား..” “စာအုပျလာငှားတာ…..အဆနျးလား ဟ.. ထိနျဝငျးရ” “မှုတျဖူးဟ…သူငှားတာ..ဒီ စာအုပျ..” “ဟေ…” နောငျလတျနှငျ့ သနျးရှိနျက “အခဈြခှဲတမျး” စာအုပျလေးကို ..ကွညျ့ရငျး ပွိုငျတူအျောလိုကျသညျ။ ထိုစဉျမှာပငျ ဝထ်တုစာအုပျ သုံးလေးအုပျကိုငျကာ.. လမျးထိပျမှ ပွနျဝငျလာသော စှာတေးလေး ကို တှလေို့ကျကွရသညျ။ “လာနပွေီ..မငျးလိုကျရှီးပါလား…နောငျလတျ..” “ဟာ..ဘာအငျထရိုမှ မဝငျရသေးပဲ.. ဖွဈပါ့မလားဟ..”
“ဖွဈပါတယျ..တဈနကေ့ကိစ်စကို တောငျးပနျပေါ့..” “ဟုတျသားပဲ..မငျးကလဲ..ကွောငျနပွေနျပွီ” ထိနျဝငျးက ပငျ့ပေးသလို သနျးရှိနျ က မွှောကျပေးသညျ။ နောငျလတျ ရငျတှတေဒိတျဒိတျ ခုနျလာသညျ။ ခွဖြေား လကျဖြားတှေ အေးခငျြခငျြဖွဈလာသညျ။ သို့သျော သူငယျခငျြးမြား အထငျသေးမှာလညျး စိုးသေးသညျ။ “အေး..ငါလိုကျရှီးအုံးမယျ..” နောငျလတျ လကျဘကျရညျဆိုငျထဲမှ သှကျလကျသော ခွလှေမျးမြားဖွငျ့ ထလိုကျသှားသညျ။ လကျဘကျရညျဆိုငျ မှ သီခငျြးသံက ကယျြလောငျ စူးရှလှနျးလှသညျ။
“ညီမ..” နောငျလတျ..မခြောလေးနောကျမှ အသံပွု၏။ လှပဝိုငျးစကျခါ တငျးကားနသေော တငျပါးဆုံ လုံးလုံးလေးမြားက စညျး ခကျြမှနျမှနျ တကျလိုကျ ကလြိုကျ သှားနသေော ခြာတိတျမလေးက.. မကွား.. သှားမွဲသှားနသေညျ။ နောငျ လတျ ရငျတှေ ပို၍ ပို၍ အခုနျမွနျလာသညျ။ အသံကိုမွငျ့ပွီး ထပျချေါလိုကျသညျ။ “ညီ..မ…” အသံက တုနျခပျနသေဖွငျ့ တိုးတိတျလှနျးနေ၏။ ပြော့ပြောငျး နကျမှောငျသော ဆံနှယျလေးမြား ဖှားကနဲ ဖှားကနဲ နောကျသို့လှငျ့ကနျြရဈအောငျပငျ မခြောလေးက ခွလှေမျးမွနျ၏။
“ညီမလေး…” အနားကပျပွီး..သူချေါလိုကျသညျ။ “အို..” ကောငျမလေး တဈကိုယျလုံး တုနျလှုပျသှားသညျ။ တဈဖကျသို့လညျး ကိုယျလေးယို့သှားပွီး မကျြမှောငျကုတျ ကွညျ့၏။ နောငျလတျ ဘာဆကျပွောရမှနျးမသိ ရယျပွလိုကျသညျ။ “ဘာလဲ..သှား စဈဆေးခိုငျးနတောလား.. ကမြ သှားဆရာဝနျ မဟုတျဘူး..” “ဟာ..မဟုတျပါဘူး..ရီပွတာလေ..” “ဘာကိစ်စ..အဖွူထညျကွီး..ရီ ပွတာလဲ.. မလိုပါဘူး..” “ဟိုဥစ်စာ…ဖွဈလို့ ရီပွတာပါ” “ဘာ..ဥစ်စာလဲ..ဟှနျး..မသိဘူး.” နောငျလတျ အကဉျြး အကွပျသို့ရောကျ နသေညျ။ ရှမေ့တိုးသာ နောကျမဆုတျသာ..ဘာလုပျ၍ ဘာပွောရမှနျးမ သိ.. အစ စဉျးစားထားသမြှလညျး ခေါငျးထဲမှ မပျေါဖွဈနေ ရသညျ။ “အျော..ဟိုဒငျး…ကြှနျတျော တောငျးပနျခငျြလို့ပါ..” “ရှငျ့ကို ကမြ ပိုကျဆံခြေးထားတာမှ မဟုတျပဲ” စှာတေးက သရျော ပွုံးနှငျ့ တဈလုံးမကနျြ ခလြျောတုတျပွဈနေ၏။
“ကိုယျ..အကောငျးပွောတာပါ..ဟိုတဈနကေ့ ကိစ်စ တောငျးပနျပါတယျ..” “အိုး..ဘယျကိစ်စလဲ..ခငျဗြားလာမရဈနဲ့နျော..” စှာတေး က စှာလှနျးသဖွငျ့ နောငျလတျ ကြှတျနသေညျ။ “မှတျထား..ရီးစားစကားပွောတာ.. ဒီပုံတှနေဲ့ လမျးပျေါမှာ.. အာပလာလုပျတဲ့ ခတျေက ဟိုး နိငျတီးပှိုငျ့တီးမှာ ကနျြ ခဲ့ပွီ..သှားတော့” “ဟုတျကဲ့…ဟုတျကဲ့..” နောငျလတျ အကွီးကယျြဆုံး ကရြှုံးသှားသညျ။ လူလညျခေါငျမှာ..ခှေးခြီး နငျးမိသော မကျြနာကွီးဖွငျ့ မအီမသာ.. တပျခေါကျပွနျခဲ့ရသညျ။ “လာ…ဒီက..လာကွညျ့..တှလေ့ား… အပီအပွငျပဲ..” ထိနျဝငျးက လကျထဲက အားကောငျးလှနျးသော ရကွေောငျးသုံး မှနျဘီလူး အလေးကွီးကို နောငျလတျ လကျထဲ ထညျ့ရငျး ပွောသညျ.။ နောငျလတျ မှနျဘီလူးကို ယူပွီး ထိနျဝငျး ညှနျပွရာသို့ ကွညျ့၏။
“ဟား…ပိုငျတယျကှာ..ထမငျးမစားပဲ ဒီပွူတငျးပေါကျက.. တဈနကေုနျ ထိုငျကွညျ့ဖို့ကောငျး တယျ..” လညျတိုငျ ကြော့ကြော့လေး ကို မော့ထား၏ ။ဖားဝသေော ဆံနှယျလေးမြားကို စုစညျးသိမျးတငျရငျး ရငျလြားထမီ လေး မောကျကွှလာသညျအထိ ခါးကိုဆနျ့ လိုကျသညျ..စှံ့စှံ့ကားကား တငျပါးကွီးမြားက ခုံပုလေးပျေါ၌ ပုံ့ပုံ့ အိ အိ လေး ရှိနေ၏။ ထိနျဝငျး..လကျနှဈဖကျကို ပှတျရငျး ဝါကွှား လာသောလသေံနှငျ့ ရယျရငျးပွောသညျ။ “ဦးဏှောကျဆိုတာ..လှာသုံးရတယျကှ.. မှတျထား ..ဟဲ..ဟဲ” “တျောပါပတေယျ..ကို ထိနျဝငျးရယျ.. တကယျပါဗြာ..” “ဟဲ..ဟဲ..မခြီးကြူးနဲ့.. မနတေတျဖူးကှ.. ဟီး..ဟီး..” နောငျလတျ မကျြလုံးမြားကို မှနျဘီလူးနှငျ့ ပွနျတပျ၏။ “ဟ..ဘာကွီးလဲ..” ရုတျတရကျ နောငျလတျသညျ.. အထူးစိတျဝငျစားဟနျဖွငျ့လညျး ပွူတငျးပေါကျမှ ကြှံကသြှား မတတျ ကုနျးကွညျ့ ၏။ “ဟယျ..အယျနတောပဲ..ဟိဟိ.. ရှာတတျတယျ ကွံကွံဖနျဖနျ..” မမခိုငျ့လကျထဲမှ..ရာဘာလီးအတုကွီးမှာ ကွီးမားပွောငျလကျနသေညျ။ မခေိုငျက..ရယျကြဲကြဲ မကျြနာဖွငျ့ လီး ထိပျကွီးကို လြာထိပျလေးဖွငျ့ ထိုးပွသညျ။ တဝကျခနျ့အထိ လညျး ပါးစပျထဲ ငုံ၍စုပျပွလိုကျရာ မှနျတငျခုံတှငျထိုငျ နသေော ယုနှယျမှာ တသိမျ့သိမျ့ ဖငျဆောငျ့ပွီးရယျသညျ။
“ကောငျမ ဘယျနှဈခါ စုပျဖူးနပွေီလဲ မသိဘူး..ဟှနျး” “မစုပျဖူးလို့ ..ဒါကွီး ဝယျလာတာ.. စမျးကွညျ့ရအောငျ.. ယုနှယျ” “ဘယျလို စမျးမှာလဲ…ဟုတျမှလဲ လုပျနျော… မမခိုငျ” မမခိုငျက အခနျးဒေါငျ့သို့သှားကာ ထမီလေးကို ခြှတျလိုကျ၏။ ယုနှယျ..မကျြလုံးအဝိုငျး သားဖွငျ့ ကွညျ့နရှောသညျ။ ဖွူဝငျးစိုပွသေော မမခိုငျ့ အောကျပိုငျး အလှလေးမြားမှာ မိနျးကလေးခငျြး အားကလြောကျသော အလှဖွဈသညျ။ ပွညျ့တငျး ဖေါငျးကားနသေော တငျပါးလေးနှဈလုံးက ရအေိုးတငျ၍ ရလောကျအောငျ ကော့တငျးခြိတျနသေညျ။
မခေိုငျက ယုနှယျထံသို့ တဈခကျြ စှကွေညျ့ရငျး.. ရယျသညျ။ ပွားခပျြတငျးမာနသေော ဗိုကျသားလေး အောကျမှ သေးကငျြသော ခါးသှယျလေးတှငျ လီးအတုကွီး ခါးပတျဖွငျ့ သားရေ အပြော့စားကို ပတျလိုကျသညျ။ ခွောကျ လကျမ ရှညျလကျြ လေးလကျမခှဲခနျ့ အရှယျတောငျ လုံးပတျရှိသော လီးကွီးက မခေိုငျဆီးခုံမှနေ၍ ရှသေို့ ထောငျ ထှကျလာသညျ။ ခါးပတျ အတှငျးပိုငျးမှ အလားတူ တနျဆာမြိုး တဈခုက မခေိုငျ၏ အဂျါစပျအတှငျးသို့ နှဈဝငျသှား သညျ “အငျး..အငျး..ကြှတျ..ကြှတျ..” ခါးပတျကို တငျးတငျး ပတျ လိုကျသညျနှငျ့ မခေိုငျစောကျပတျလေးအတှငျး ပွညျ့ကွပျနာကငျြသော ဝဒေနာကို ခံစား လိုကျရသညျ။ ယုနှယျက မခေိုငျလုပျနပေုံ ကို ကွညျ့၍ သဘောပေါကျသှားသညျ။ ခါးလေးလိမျရငျး ကွညျ့နရောမှ မှနျတငျခုံ ထိုငျခုံပျေါမှထကာ အခနျးဒေါငျ့သို့..မရဲတရဲ လြောကျသှားက မခေိုငျ့ခါးပတျရှိ လီးကွီးကို အသအေခြာ ကိုငျကွညျ့သညျ။
“ထမီ ခြှတျလိုကျလေ .ယုနှယျ.. စမျးကွညျ့ရအောငျပါဆို..” “အယျ..ကှဲပွဲကုနျရငျ…ဘယျလိုလုပျမလဲ..” “အိုး..နငျ့ဟာက..ဒါလေး တောငျ.. မဝငျအောငျ .. ကဉျြးနလေို့လား..” “မသိဘူးလေ..တဈခါမှ..မလုပျဖူးတဲ့ဟာကို..” “ခြှတျပါ…နာတော့လညျး..မလုပျနဲ့ ပေါ့..” မခေိုငျ အဆှယျကောငျး ၍ ယုနှယျ ..ထမီ ခြှတျလိုကျသညျ..။ ပွဈမြိုးမဲ့မထငျ အလှမြိုးဆိုသညျကို နောငျလတျတို့ အဖှဲ့ စာဖှဲ့ ဖူးကွသညျ။ အပွဈကငျးစငျပွီး မှဲ့စှနျးလေးတောငျ မရှိသော အလှမြိုးဖွဈသညျ။ ယခု မှနျဘီလူးထဲ၌ ယုနှယျ၏ ဖွောငျ့စငျး ကွီးမားသော ပေါငျတနျကွီးမြားကွားမှ အဖုတျမဲမဲကလေးကို ထငျးကနဲ တှရေ့သညျ။
ခုံးခုံး မို့မို့လေး ဖေါငျးကားနသေော ဆီးခုံဝငျးဝငျး လေးအောကျမှ အကှဲကွောငျး နကျရှိုငျးရှိုငျးလေးက ပေါငျကွားမှ တိုးဝငျ ပြောကျ ကှယျလကျြရှိသညျ။ မခေိုငျက ..ထမီလြောခလြိုကျသညျနှငျ့ မတျထောငျကာ ဝငျးလကျစှာပျေါ လာသော.. ယုနှယျနိ့ကွီးနှဈလုံးကို အသာအယာ ဆုတျကိုငျလိုကျပွီး နိ့သီးခေါငျးလေးမြားကို ဖွေးညှငျးစှာ ပှတျ နယျပေးလိုကျ၏။ “ဟာ..ဟာ…အ..ဟငျ့..” ယုနှယျ ..မကျြတောငျလေးမြား မှေးစငျးသှားကာ မခေိုငျလကျကလေးမြားကို ဆုပျကိုငျလိုကျမိသညျ။ အကွော စိမျးလေးမြား ယှကျသနျးနေ သော ယုနှယျပါးပွငျလေး နှဈဖကျ၌ တမဟုတျခငျြး သှေးရောငျလေးမြား လှမျးသှား သညျ။
မခေိုငျ..အသကျရူသံလေး ပွငျးလာသညျ။ ယုနှယျ နိ့သီးခေါငျးလေး နီနီစှေးစှေးကို နှုတျခမျးနှဈလှာဖွငျ့ ငုံခဲ၍ လြာ ထိပျကလေးဖွငျ့ ကလိပေးလိုကျရာ ယုနှယျခမြာ တီ ဆားနဲ့တို့သကဲ့သို့ ဖတျြဖတျြလူးကာ တှနျ့လိမျသှား လေ တော့သညျ။ “အငျ…ဟငျး… ဟငျး..အ..ကြှတျ…တမြိုးကွီးပဲ.. ခိုငျရယျ..” “ယုနှယျ ..ဟာထဲကို ဒါထညျ့လေ… ပေါငျကားထား..” “ဖွဈ…ဖွဈပါ့.မလား….ခိုငျ…မ ဝငျရငျ..ဒုက်ခ..” “အရမျးနာရငျ မထညျ့နဲ့ပေါ့. ..ယုနှယျရဲ့ … ကဲ…လာ..” မခေိုငျက သူမခါးမှ ရာဘာလီးတုကွီးကို ယုနှယျစောကျပတျ အဝ၌တပွေီ့း… ခါးကိုဖကျခါ…ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ “ဗွှတျ..အား…အာ…နာတယျ..ခိုငျ…နာတယျ…” ခွောကျသှသေ့ော ရာဘာလီး တုကွီးက ဖွူဖှေးနူးညံ့သော ယုနှယျ စောကျဖုတျလေးထဲသို့ အခွောကျတိုကျကွီးဝငျ သှားလရော နာကငျြသှားရရှာသညျ..။ မခေိုငျ က ဖိသှငျးခွငျးကို ရပျလိုကျပွီး..ယုနှယျ ၏ လှပစိုပွသေော နှုတျခမျး လေးကို စုပျယူလိုကျပွနျသညျ။ မခေိုငျက ရာဘာလီးအတုကွီး တဈဖကျက ဝငျထားသညျမို့ အလှနျခံခငျြစိတျတှေ ပွငျးပွနသေလောကျ ယုနှယျမှာအစိမျးသကျသကျလေးဖွဈရာ…ရုတျတရကျ ရှကျခွငျး ကွောကျခွငျးတို့ကသာ ကွီး စိုးနသေဖွငျ့ ခံစားမရနိငျအောငျ ဖွဈနရေလသေညျ..။
“မရဘူး…မရဘူး…ခိုငျ…ယုနှယျ.. အရမျးနာတယျ..” ယုနှယျက မခေိုငျပုခုနျးကို တှနျးထုတျရငျးဖွငျ့ ပွောသညျ။ သို့သျော မခေိုငျက မကျြနာလေးတပွငျလုံး နီရဲလာကာ အသားလေးမြား တဆတျဆတျတုနျလာပွီး အသကျရှုပွငျးထနျလာနေ၏။ “အစမို့ပါ…နှယျ ရဲ့..အို..မတှနျးနဲ့လေ.. အငျ့…အ” “ဟငျ့အငျး…ဟငျ့အငျး…မလုပျခငျြတော့ဘူး…နာတယျ.. နာတယျ..” ယုနှယျက ဇှတျကနျ ငွငျးသညျ။ မခေိုငျ့ပုခုနျးကို တှနျးထားနရောမှ ခါးကိုစုံကိုငျပွီး တှနျးပွနျသညျ။ မခေိုငျကလညျး အားနှငျ့ ပွနျဆှဲသှငျးနလေရော လီး ကွီးမှာ ယုနှယျ စောကျပတျလေးထဲသို့ တဈဝကျလိုးပေး နသေကဲ့သို့ ဖွဈနေ ပသေညျ.။ ဝငျသှားလိုကျ..ထှကျလာလိုကျဖွငျ့ လှုပျရှား ရငျး.. ယုနှယျ စောကျခေါငျးလေးအတှငျးနှငျ့ ပှတျတိုကျဖနျ မြားလာ လတေော့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ စောကျရကွေညျလေးမြား ယိုစီး ကလြာ၏။ လီးအတုကွီးတှငျလညျး စိုစှတျ ပွောငျလကျလာလတေော့သညျ။
ယုနှယျ.. ပေါငျသားလေးမြားမှာ မသိမသာ ပုစှနျဆိတျခုနျလေး ခုနျလာသညျ။ ရငျ ထဲ၌လညျး တဒိနျးဒိနျး နှလုံးခုနျသံမွညျနသေညျ။ ပထမတုနျးကတော့ အပြျောလိုလို အစမျးသဘောလိုလို လုပျခဲ့မိခွငျးဖွဈသျောလညျး အဂျါစပျထဲသို့ ထိုပစ်စညျးကွီး နငျ့နငျ့နဲနဲ ဝငျ ရောကျပွီး တကယျခံစားနရေသောအခါ ဘယျတုနျးကမှ မခံစားဖူးသေးသော အရသာ တဈမြိုးကို ယုနှယျ ခံစားလာရသညျ။။ မေ ခိုငျ၏ ကြှမျးကငျြပါးနပျစှာ ကိုငျတှယျ ပှတျသပျပေးမှုလေးမြားကလညျး.. တဈကိုယျ လုံးကွကျသီးလေးမြား အဖုအဖု ထလာသညျ။ တဇိုးဇိုး တဇတျဇတျ တုနျရီလာပွီး.. နှုတျခမျးလေး နှဈမှာမှာလညျး ပုစှနျဆိတျ ခုနျ ခုနျလာလတေော့သညျ။ “အား… အငျး..ဟငျး..ဟငျး…အ…အား… အား…အ.” “ဘှတျ…စှပျ…ပွှတျ…ဘှတျ…စှပျ..ပွှတျ… ဘှတျ..စှပျ..” စောကျရမြေားက တစိမျ့စိမျ့ ကလြာသညျ.. စောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးမြားကို စိုစှတျဝငျးလကျ လာစသေညျ။ အစ ပထမ ကဲ့သို့ ခွောကျခွောကျကပျကပျ နာနာကငျြကငျြ မဟုတျတော့ပဲ.. တကယျ့ပကတိ ယောကျြားကွီးတဈ ယောကျ၏ လီးကွီးကဲ့သို့ အရသာရှိလှနျးလှပွီး ပွပွေဈ ခြောမှစှေ့ာ လိုးပေးနသေော.. မခေိုငျကိုယျတိုငျမှာလညျး မကျြစေ့ နှဈလုံးမှိတျခါ နှုတျခမျးလေးမြားကို လြှာဖွငျ့ယကျခါ.. ယကျခါ.. မှိနျးရငျး ကာမအရသာ ခံစားနေ၏။
“ဘှတျ..စှပျ” ဟူသော အသံနှငျ့ ဒဈအဖုကွီး ကြှံဝငျသှားပွီး စောကျခေါငျးလေးထဲသို့ စူးနှဈဝငျရောကျသှားတိုငျး စောကျစိလေး မှာ တငျးမာသှားတတျပွီး အတငျးဖိကပျ ပွနျလညျ၍ ခါးလေး ကော့ကော့ပေးမိလာသညျ။ အိတှဲခွငျး မရှိ..အပြိုစငျ နိ့ကလေးအစုံက မာသထကျ မာကာ တငျးသထကျ တငျးကဈြမာတောငျနပွေီး မခေိုငျ့နိ့သီးခေါငျးလေး မြားနှငျ့ ယုနှယျ နိ့သီးခေါငျးလေးမြား အကွိမျကွိမျပှတျ တိုကျ..မိကွသညျ။ တဈခါတဈခါ အငျနှငျ့အားနှငျ့ ဆောငျ့သှငျး ခွငျး ခံလိုကျရသော အခါမြားတှငျ ဆီးအိမျတဈခု လုံး ကငျြတကျသှားကာ စောကျခေါငျး အတှငျးမှ ဆောကျတညျရာမရ ..မရိုး..မရှကွီး ဖွဈဖွဈ သှားတတျသေး၏။ ထိုအခါမြိုးတှငျ ယုနှယျက မခေိုငျ့ ကြောပွငျလေးကို တငျးတငျးလေး ဆှဲဖကျခါ တငျပါးကွီးမြား တုနျခါသှားသညျ အထိ..အားကမြခံ ပွနျလညျ ဆောငျ့ပွဈလိုကျမိတတျ၏။ “အီး…အား….ယုနှယျ…တတ…အား.. ငါ..ပွီးတော့မယျ” မခေိုငျက ခြှေးကလေးမြား စို့လာပွီး တအီး အီး ငွီးတှားကာ အဆကျမပွတျကွီး ဆောငျ့လိုကျလတေော့သညျ…။ “ဘှတျ…စှပျ…စှတျ…ဘှတျ…ပွီးပွီ…ပွီး…ပွှတျ..” “အငျ့… အငျ့…အငျ့…အ .. အီး…မေ…မခေိုငျ… အ…အ…အား…” ဖွူစငျ ဝငျးပနသေော ခန်ခာကိုယျလေး နှဈခုမှာ အထိနျးအကှပျမရှိ လှုပျ ရမျးနကွေပွီး.. မွှနှေဈကောငျကဲ့သို့ တှနျ့ လိမျကောကျကှေးသှား ကွလသေညျ။ လှပဖွောငျ့စငျးသော မခေိုငျ့၏ ပေါငျတံလုံးကွီး မြားက ယုနှယျခန်ခာကိုယျ လေးကို ပွဲကားကားကွီးခှလကျြ အထကျအောကျပှတျသပျရငျး တုနျခါသှားရှာသညျ..။
ယုနှယျ မှာလညျး ငလငျြ ပွိုကသြကဲ့သို့ ရှနေ့ောကျ ယိမျးခါသှားရှာလသေညျ။။ စောကျခေါငျးအတှငျးမှ သိမျ့သိမျ့ခါသှားကွပွီး နှဈ ယောကျသား ကဈြကဈြပါအောငျ ဖကျလကျြ သုတျရမြေားကို လှတျထုတျလိုကျကွလတေော့သညျ။ “အား….အား….အား…… အာ…” နှဈယောကျစလုံး ပြော့ခှသှေားကာ ကွမျးပွငျပျေါ၌ ပုံလကျြသားလေးမြား ကရြောကျသှားကွလသေညျ။ မခေိုငျနှငျ့ ယု နှယျ လီးခါးပတျကွီးနှငျ့ တဈယောကျကို တဈယောကျ အားရအောငျ လိုးနကွေပုံကို နောငျလတျနှငျ့ ထိနျဝငျးက အားကောငျးလှ သော မှနျဘီးလူးကွီးဖွငျ့ အစအဆုံးကွညျ့ကာ လူသားစဈစဈ လီးကွီးမြားက ပုဆိုးမြား ထဲမှ သှားရေ တမွားမွားနှငျ့ ပုဆိုးမြား စိုစှတျခါ အကှကျကွီးမြားဖွဈကုနျသညျအထိ တောငျနမေိကွလသေညျ။။ “ယုနှယျရေ…ဟေ့…မခေိုငျ…အိုး…ဘယျလိုဖွဈနကွေ တာလဲ… ဟငျ” အခနျးအတှငျးသို့ ဝေါလျပိုစတာကွီး တဈလိပျကို ကိုငျးရငျးဝငျလာသော ယဉျထှေးမှာ ခွလှေမျးမြား တုနျ့ကနဲဖွဈ သှားရလသေညျ။ ယုနှယျက ရှကျစနိးအပွုံးလေးဖွငျ့ ပွုံးရငျး သူမစောကျပတျကွီးထဲမှ သုတျရမြေားနှငျ့ လိမျးကွံ ပရေနေသေော လီးကွီးကို ဖငျလေးနောကျဆုတျပွီး ပွှတျကနဲ ဆှဲနှုတျလိုကျပွီး ထလိုကျခါ ရခြေိုးခနျးလေးထဲ ပွေး ဝငျသှားလတေော့သညျ…။
မခေိုငျက ခါးပတျခေါငျးကို ဖွုတျနေ၏။ ပွီးမှ.. သူမစောကျဖုတျကွီးထဲ၌ အဆုံးထိ ဖိကပျ ဝငျရောကျနသေော လိငျတံအတုကွီးကို လကျဖွငျ့ ကိုငျလှညျ့ကာ ပွှတျ ကနဲ ဆှဲနှုတျလိုကျသညျ။ သုတျရအေဖတျ အဖတျမြားက လီးဒဈကွီးတှငျ စုပွုံပွီး ကပျပါလာကွလေ သညျ…။ “ဟငျး…ဈေးဦးဖေါကျပွီးကွပွီပေါ့လေ….. ဘယျ့နှယျ့လဲ..” “အဟငျး…ထှေး…စမျးကွညျ့ပေါ့…ဟငျး…ဟငျး” မယဉျ ထှေးက ရာဘာလီးကွီးကို မရဲတရဲလေး ကိုငျကွညျ့ကာ အသံတုနျတုနျကလေးနှငျ့ ရယျရငျး ပွောသညျ။ “အတျောကွီးတာပဲနျော… ယောကျြားလီး အတိုငျးပဲ ဟယျ…” “အားလုံးတော့ မတူဘူးပေါ့…ထှေးရဲ့ .. သူ့မှာက .. လူလို အပူရှိနျ မရှိတော့…အေးစကျစကျကွီး ခံလို့ အရသာ သိပျ မရှိလှဘူး..” “အံမယျ…သူအလိုးခံဖူးတာ ကလြို့..ဟှနျး..” မခေိုငျက …ရခြေိုးခနျးထဲသို့ လီးခါးပါတျကို ဆေး ကြောသုတျတငျရနျ ယူဆောငျသှားလသေညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ယုနှယျ တဈယောကျ ရစေကျ ရပေေါကျကလေးမြား စိုစှတျခိုတှယျနေ သော ယုနှယျ မကျြနာလေးက ပကတိ က လေး မကျြနာလေးအလား မရှံ့မရအပွုံးလေးနှငျ့ လှပလှနျးနသေညျ။။ ဒူးဆဈအထိ ဖုံးဖိ နသေော ယုနှယျခန်ခာ ကိုယျလေး အောကျပိုငျးမှ ခွသေလုံးသား ဝငျးဝငျးလေးမြားက ကွှရေုပျကလေး နှယျ တောကျပဝငျးလကျ နသေညျ။ အထှေးက ယုနှယျ နဖူး နုနုလေးကို ညှငျသာစှာနမျးလိုကျသညျ။
“ဒီမှာ…ပုံတဈပုံဝယျလာတယျ..တှလေ့ား..” လကျထဲမှ ပိုစတာကွီးမှာ ရုပျရှငျမငျးသား စတားလုံး ( ရမျဘို ) ၏ ကွှကျသား အဖုအထဈမြား ပွပွေဈစှာ ဖျေါပွ ထားသော တညျ့တညျ့ရပျနသေညျ့ ကိုယျလုံးအလှပျေါ ပုံကွီးဖွဈသညျ။ “ဟယျ…လှလိုကျ တာ..အဲဒါ…မမထှေး ဘယျကရလဲ..” “ဖလျောရီဒါက ပွနျလာတဲ့ မမထှေး သူငယျခငျြးမ စိုးသန်တာ. .ဆီကလေ…ဒီမှာက..ဒီပုံမြိုး လုံး ဝ မရှိဘူး..” မှနျပါသညျ..ဆိုဒျကွီး ကိုယျလုံးပျေါ ပုံမြားမှာ ယခုနှဈနောကျပိုငျးမှ နိငျငံခွား ရုပျရှငျအဂေငျြစီမြားက ဈေးတှကျ တှကျ ပွီး သီးသနျ့ရောငျးခလြာခွငျးဖွဈရာ… မွနျမာပွညျအတှငျး၌ ယခငျရှိပွီး ပုံမြားဖွဈသော သုံးခြိုးနှဈခြိုးပုံမြား သာ ရှိပွီး ယခုကဲ့သို့ ခွဖွေားအထိ ခွောကျပဆေိုဒျကွီးမြိုး လုံးဝ ဝငျလာခွငျးမရှိသေးပေ..။ “ဒီ မတျတပျ ဗီဒိုကွီးမှာ ဟောသလိုတငျ..” ထှေးက ကွိုး သိုငျး ပိုကျဆံအိတျကလေးကို စားပှဲပျေါတငျလိုကျပွီး ပိုစတာကွီးကို ဘီဒိုကွီး၌ ကပျပွသညျ..။ခါးဝတျ ဘောငျးဘီတို အနကျ ကလေးသာ ပါသော စတားလုံးပုံပ မိနျးမပြိုမြား စိတျကူးယဉျခငျြစရာ.. ကွှကျသားအဖုအ ထဈကွီးမြား အမွောငျးလိုကျ…ကွှရှ ဖျေါငျးကွှနပွေီး.. ညို့အားကောငျးသော မကျြလုံးမြားကလညျး.. ပကတိ လူ့ မကျြလုံး အနအေထား အတိုငျး ဆှဲဆောငျမှု အပွညျ့အဝ ရှိနပွေနျရာ ယုနှယျ ရငျခုနျသှားမိသညျ။
“ဟှနျး…ရုပျကွီးကလဲ အသကျဝငျလိုကျတာ…မမထှေးရယျ.. မကျြလုံးကွီးတှကေ ရငျကို ခုနျသှားတာပဲ..” ယဉျထှေးက ကနြေပျ စှာပွုံးသညျ..ကျောဗူးအဝါလေးကို ယူလိုကျပွီး..ဘီဒိုကွီး၌ စိတျရှညျလကျရှညျ ကပျနသေညျ။ ရခြေိုးခနျးထဲမှ ထှကျလာသော မေ ခိုငျက ပိုစတာပုံကွီးကို တအံ့အအောကွညျ့ကာ .. ခွဖြေားလေးထောကျပွီး မွောကျကွှ မွောကျကွှ ခုနျလိုကျရငျး “ဟုတျပွီ…မေ ထှေး..ဒီနားမှာ အပေါကျဖေါကျပွီး ဒါကွီး တပျထားလိုကျရငျ..အို..ကေ..” “ဟယျ…အသဲယားစရာကွီးဖွဈသှားပွီ…ဟီး..ဟီးး” ထှေ က ဦးဆောငျပွီး ဘီဒိုတံခါးကို ရနျဘို လီးနရော၌ အပေါကျငယျလေး ဖေါကျကာ ရာဘာလီးကို အတှငျးမှ အ သေ စှပျပွီး တပျလိုကျ ကွလသေညျ..။ “တောကျ…မခငျြ့မရဲ ..ဖွဈလိုကျတာကှာ..ဟငျးဟငျး…” ထိနျဝငျးက မှနျဘီလူးကို သနျးရှိနျအား ပေးလိုကျပွီး ပွော၏။ သနျးရှိနျက လညျခြောငျးမှ ဇလုပျကွီး တကျလိုကျ ကြ လိုကျဖွဈခါ… တံတှေးမွိုခရြငျး ကွညျ့နလေသေညျ။
“ဒီဟာမလေးတှေ…တျော.တျော..ယားနကွေဘီကှ..” “အေး..သူတို့က ယားနတေယျ..ဒို့ကလဲ တောငျနပွေီ..” ထိနျဝငျးက လီးကို လကျတဈဖကျနဲ့ ဆုပျကိုငျရငျး ရမ်မကျ မကျြနာနှငျ့ ပွောလိုကျရာ သနျးရှိနျက အဟားဟား ရယျရငျး ပွောလိုကျသညျ။ “ဟား..ဟား..ကွကျတကျရယျ.. မငျးဟာလေးက ကွကျတကျလေးလောကျရှိတာ..မငျ့ဆျောက မငျးကို တဈညပဲ ပေါငျးပွီး ကှာပွဈ မှာ သခြောတယျ .. ဟား…ဟာ..” “ဟ …ခှေးမသား…လီးကှ..လီး…မှတျထား.. မသမေခငျြး တဈညလုံးလိုးမဲ့လီး…ဇီးမကပျရငျ .. လီးဖွတျပွဈမယျ ကှ သိလား” ထိနျဝငျးက ပုကှကှ သူ့ခန်တာနှငျ့ လိုကျအောငျ ကွှားလုံးထုတျလိုကျသောကွောငျ့ နောငျလတျနှငျ့ သနျး ရှိနျမှ အူနှိပျ ၍ ရယျကွဟနျကို တမငျပွုလုပျဖွဈလိုကျကွသညျ..။ “အေး…ရယျကွ…ရယျကွ…နောကျမှ.. ကိုထိနျဝငျးရယျ.. ခငျဗြား ဟာကွီး ခဏလောကျ ငှားပါဗြာ.. လို့ လာမပွောနဲ့ ဟငျး” ထိနျဝငျး မကျြနာက အတညျပွောနခွေငျးဖွဈပါသညျ..။ ယောကြားဖွဈပါ လကျြ ကွကျတကျ ဟု အချေါခံရသညျကို ထိနျဝငျးသာ မဟုတျ ဘယျယောကြားကမှ အပွောမခံခငျြတတျကွပေ…။ နောငျလတျက ခန်ဒာကိုယျထှားကွိုငျးပွီး ဖွူဝငျးစိုပွသေော အသားအရကွေောငျ့ မိနျးကလေးမြား ခိုကျ လောကျအောငျ ခြောမောသူဖွဈသညျ။
မိနျးကလေး ဆိုသညျမာလညျး ရုပျခြော …ခိုကျ.. ပစ်စညျးဥစ်စာ ကွှယျဝလငျြလညျး…ခိုကျ…လိငျအဂါကွီးမားလှနျး၍ ထငျရှားသူဆို လငျြလညျး မခိုကျသညျ့တိုငျအောငျ စိတျဝငျတစား ရှိတတျကွသညျ။ ယခုလညျး နောငျလတျ ထိနျဝငျးနှငျ့ သနျးရှိနျတို့နှငျ့ ဂဈြကနျကနျ အဖွဈမြိုး တိုးခဲ့ကွသညျ့နောကျ အုပျစုခငျြးက မသိမသာ စိတျဝငျစားမှုကို ဖုံးကှယျ ရနျစောငျ ဟနျသာပွနကွေသညျ။။
“ဒါ…ကမြ ယူထားတဲ့ ..စာအုပျရှငျ့..” “ဟလား…ဒါဆိုအတျောပဲ…အတူဖတျကွတာပေါ့..” နောငျလတျနှငျ့ မခေိုငျက စာအုပျဆိုငျ၌ ဤနယျစဆုံဖွဈကွသညျ။ “စကားပွောတာ…ကွညျ့ပွောနျော… ဟငျး…ပါးကှဲသှားမယျ..” “ကိစ်စမရှိပါဘူး…မခေိုငျ…ကိုနောငျ့အသဲ ကို မခှဲရငျ ပွီးတာပဲ…တကယျတော့.. အခဈြဆိုတာ.. တဈယောကျတဈလှညျ့ ကှဲကွရတာပါ..” “ဘာ…ဘာပွောတယျ…” မခေိုငျ့ မကျြနာလေး ရဲရဲနီကာ နှုတျခမျးလေးကိုကျပွီး အျော၏။ စာအုပျဆိုငျဒေါငျ့ အတှငျးဘကျ၌ မခေိုငျနှငျ့ နောငျ လတျတို့ပှဲကို မညျသူ တဈစုံတဈယောကျကမှ သတိမထားမိကွခြေ..။ “ဟုတျတယျ..မခေိုငျရဲ့..စဉျးစားကွညျ့လေ.. ပါးကှဲမယျ..ဘာညာဆိုပွီး ကြိမျးဝါးကွ ပမေယျ့.. ညားသှားကွရငျ..တကယျ သှေးထှကျအောငျ ကှဲနကွေရတာ.. မိနျးကလေးတှပေဲ မဟုတျလား” “ဟငျ…ရှငျ…ရှငျ…” “စိတျမဆိုးနဲ့ မခေိုငျ..ကိုနောငျနဲ့ဆိုရငျ..မခေိုငျ့ ဟာလေးကှဲပွဲသှားမှာတော့ သခြောတယျ.. သတ်တိရှိမှ ခဈြပါ..” “အို…ရှငျ…ဘယျလို လူလဲ…ဟငျ..” “ကိုနောငျ မခေိုငျ့ကို အရမျး လုပျခငျြနမေိတယျ.. မခေိုငျရယျ.. အိပျယာဝငျတိုငျး ကိုနောငျ့ဟာကွီးက အမွဲတောငျ နပွေီး..မခေိုငျ့ဟာလေးကို..လိုးရရငျ ဘယျလောကျတောငျ ကောငျးမလဲလို့..အမွဲ စိတျကူးယဉျနခေဲ့ ရတာပါ..မေ ခိုငျရယျ..တကယျ ပါ..”
မခေိုငျ အသကျရှုတှေ ရပျသှားမလား.. ထငျရသညျ..။ နောငျလတျ ဤမြှ ရိုငျးစိုငျးလိမျ့မညျဟု .. မခေိုငျထငျမထား ..ရိုငျးပွလှနျးသော နောငျလတျ စကားမြားက မခေိုငျ့ ပါးစပျကို အဟောငျးသားလေးဖွဈစသေညျ။ “မခေိုငျ…ကိုနောငျ့ကို ခဈြပါနျော..နျော.. မေ ခိုငျအတှကျ ကိုနောငျ…ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ ကောငျးကောငျးလေး လိုးပေးနိငျ ပါတယျ..” နောငျလတျကိုယျမှ အရကျနံ့သငျးသငျးလေးကို မခေိုငျ ရှုရှိုကျမိ၏။ နောငျလတျ အရကျမှုးမှုးနှငျ့ ထငျရာတှေ စှတျ ပွောနခွေငျးပါ..ထို့ကွောငျ့ စကားဖကျပွိုငျနလေငျြ မိမိ မိနျ ကလေးဖကျကသာ အနာခညျြးမို့..ဆတျကနဲ လှညျ့ ထှကျလိုကျသညျ။ နောငျလတျကလညျး ပွတျပါဘိ ..ပုခုနျးလေးနှဈဖကျကို လှဈ ကနဲ လှမျးဖကျကာ မကျြနာခငျြး ဆိုငျ ဆှဲလှညျ့လိုကျရာ ခေါငျးလေးက မော့သှားပွီး နီစှေးသော နှုတျခမျးနှဈလှာက နောငျလတျ၏ ကွီး မားထူအမျး သော နှုတျခမျးကွီး၏ ဆောငျ့ကွီး အောငျ့ကွီးစုပျယူခငျြးကို ခံလိုကျရ၏။
လကျထဲမှ ဝထ်တုစာအုပျက လှတျကသြှား ၏။ ပူနှေးမာတောငျသော ကွီးမားကဈြလဈသညျ့ နောငျလတျလီးကွီးက..မခေိုငျ့ ပေါငျ ကွားထဲသို့ ထမီနှငျ့ ပုဆိုး ကို တှနျးထိုးပွီး ဝငျရောကျလာသညျ။ မခေိုငျ ဆတျကနဲ နှလုံးလရေိုကျ၏..သတိလကျလှတျ ပေါငျလေး နှဈဖကျကို ခပျကှကှလေး လုပျပေးလိုကျမိလရော..နောငျလတျက..အငျ့ကနဲ နအေောငျ ဆှဲညှောငျ့လိုကျ ၏။ “အို..ဖယျ…လှတျ..” မခေိုငျ ရုတျတရကျ အရှကျအကွောကျကွီးလာ .. အလုံးအရငျးနှငျ့ ဝငျလာကာ…နောငျလတျရငျဘတျကို ဆောငျ့ တှနျးပွီး ထှကျပွေးသှား၏။ နောငျလတျမှာ ဖုတျလှိုကျဖုတျလှိုကျဖွဈနသေော ရငျဘတျကွီးကို ပငျ့သကျခကြာ မေ ခိုငျ့တငျပါးကွီးမြားကို လှမျးကွညျ့နမေိသညျ။ စာအုပျအငှားသမားလေးကလဲ အခုမှ ဆိုငျအနောကျဖကျခနျးကို လှညျ့ကွညျ့လိုကျရာ ပုဆိုးအတှငျးမှ တိုး ထှကျ ထောငျထနသေော နောငျလတျလီးကွီးကို တနျးတနျးမတျမတျ ကွီး တှသှေ့ားလတေော့သညျ။ “ဟား..ဟား….ကြှနျတော့ကို မ ခြိနျထားပါနဲ့ဗြာ… ကွောကျတတျလို့ပါ..” သညျည..နောငျလတျ အိပျမပြျောတော့.. ညဦးပိုငျး စာအုပျဆိုငျ၌ ဖွဈခဲ့ပွောခဲ့သညျမြားကို တှေးကာ လုံးဝ အိပျမ ပြျော…။ ထို့ကွောငျ့လညျး..သနျးရှိနျနှငျ့ ထိနျဝငျးတို့ အိပျပြျောသှားကသြညျနှငျ့ ..မခေိုငျတို့ အဆာငျဖကျသို့ ကူး ဝငျခဲ့သညျ။။ လောကကွီးသညျ…ဆနျးကယျြလှနျး၏။ တဈခါတဈရံ ခုတျရာတခွား ရှရာတဈခွားဖွဈတတျ၏။
နောငျလတျ မခေိုငျအိပျသော အခနျးထဲသို့ ရောကျခဲ့ပွီး ထိုစဉျမှာပငျ ရမျဘိုပုံကွီးရှိရာသို့ ခွဖေေါ့နှငျ့ကာ ဝငျ လာသော ထှေးကို နောငျလတျ ရှောငျရနျအတှကျ မတျတပျ ဘီဒိုကွီးဒထဲသို့ဝငျလိုကျ ရလသေညျ..။ အထဲတှငျ နလေ့ညျဘကျက တပျဆငျထားသော ရာဘာလီး အတုကွီးမှာ နောငျလတျဗိုကျနှငျ့ထောကျခါ ရုတျတရကျ ဘီဒို တ ခါး ပိတျမရဖွဈသှားသညျ။ နောငျလတျ…ကှိုငျပူပွီ…ကွံရာမရဖွဈ နရောမှ ရာဘာလီးကွီးကို ဆှဲဖွုတျလိုကျပွီး… သူ့ လီးကွီး ငိုကျပြော့ပြော့ကွီးကို ဘီဒိုအပေါကျမှ ထိုးထုတျခါ ငွိမျနလေိုကျရလေ သညျ။။ ထှေးကလညျး ရမျဘိုပုံ ကွီး ၌ တပျဆငျထားသော ရာဘာလီးအရသာကို ခံစားရနျအတှကျ.. တိတျတဆိတျ လာခဲ့ခွငျးဖွဈ ရာ.. မှုံဝါးသော မီး ရောငျအပွာရောငျ ကလေးနှငျ့ ဝိုးတဝါးဖွဈနသေော ဘီဒို ပေါကျမှ နောငျလတျ လီးကွီးကို နူးညံ့သော လကျခြောငျး လေးမြားဖွငျ့ အသာအယာ ကိုငျတှယျပှတျသပျလိုကျလရော.. နောငျလတျလီးကွီးမှာ သိသိသာသာကွီး မာတောငျ ပွီး တောငျထလာလသေညျ..။
ထှေးမှာ ရာဘာလီးကွီးကို တဈကွိမျမှ သုံးဘူးသူမဟုတျလရော ..ဘီဒိုအတှငျးမှလီး မှ ရာဘာလီးဟုသာ ထငျနလေသေညျ..။ နောငျလတျအတှကျ အကဉျြးအကပျြထဲရောကျ နသေညျ။ နောငျလတျ ခဈြသော မခေိုငျ့ဆီ သို့လာမိရာမှ မထငျမှတျပဲ ထှေးနှငျ့.. ရငျဆိုငျ တိုးနမေိခွငျးအတှကျ ခြှေးသီးခြှေးပေါကျမြား ကြ လာနရေသညျ။ မိနျးကလေး တဈယောကျ၏ ပယျပယျနယျနယျ ကိုငျတှယျခွငျးကို ပထမဆုံးအကွိမျ ခံစားရသဖွငျ့ အရသာရှိသလို ရှကျသလိုလိုကွိးလညျး ဖွဈနမေိသေး သညျ။ လီးထိပျ ဒဈအဝနားတဝိုကျ.. လကျညှိုးထိပျကလေးဖွငျ့ ပှတျသပျခွငျး ခံလိုကျရတိုငျး.. ဖငျစအိုဝ ရှုံ့သှားအောငျ နောငျလတျ ခံစားလိုကျရလသေညျ။။ စိမျ့ကငျြ သော ဝဒေနာ တဈမြိုးကို လညျး ခံစားလိုကျရသညျ။.
“အငျး..ဟငျး…အငျး…အ…အား..” ထှေး နုတျခမျးမှ ညီးသံသဲ့သဲ့ကို နောငျလတျ ကွားနရေသညျ။ နောငျလတျလီးကွီးကို လကျဖြား လေးမြားနှငျ့ ကိုငျ တှယျ ပှတျသပျနရောမှာ.. လကျဆုပျကလေးထဲ ထညျ့ကာ ..ညငျသာစှာ ဂှငျးတိုကျပေးနသေလို ပွုနပွေနျသဖွငျ့ နောငျလတျ လီးကွီးမှာ အကွောကွီးမြား ထောငျထလာအောငျ.. မာတငျး လာသညျ။ ထှေးခမြာ..ဘယျသူမှမသိ ဟူသော အသိစိတျ ဖွငျ့ နောငျလတျလီးကွီးကို ရာဘာလီးအတုဟုသာ ထငျပွီး .. စိတျရှိတိုငျး ပှတျသပျ ကိုငျ တှယျ နေ ခွငျးဖွဈ၏.။ ဘီဒိုကွီးအတှငျးမှ နောငျလတျမှာ အသားမြား တဆတျဆတျတုနျလာပွီး..လီးထိပျမှ ခြှဲကြိသော အရညျကွညျမြား ယိုစိမျ့လာသညျ အထိ ခံစားလိုကျရ သညျကိုမူ..ထှေး မသိခြေ..။ ထှေးက ထမီလေးကို ကွမျးပွငျပျေါသို့ ခြှတျခြ လိုကျ လသေညျ။ တငျပါးအောကျဖကျမှ တဈထှကျနေ သော ဖငျနှငျ့ ပေါငျဆကျနရောမှာ ကွှမောကျပွီး ခုံး ထနေ သညျ။ ထှေး၏ ဖငျအနအေထားမှာ ဖငျကုနျးပွီး လိုးခငျြစရာကောငျးသော ဖငျကောကျ အမြိုးအစားလေးပငျ ဖွဈ သညျ။ ခကျသညျက ဘီဒိုအတှငျးမှ နောငျလတျ ခမြာ ထှေး၏ လှပလှနျးသော အဆီနှငျ့ တဝငျးဝငျး ကိုယျခန်ခာ လေး ကို မမွငျရခွငျးပငျဖွဈသညျ။
ထှေးက အသားဖွူသညျ… စောကျပတျ တဝိုကျက အခွားနရောမြားထကျ ပို၍ဖွူဆှတျနသေညျ။. နူးအိသော အ သားဥလေးက လီးထိပျကို တလေ့ာသောအခါ နောငျလတျ ဘီဒိုတံခါးကို အတငျးဖိကပျခါ…လီးကို ထှကျနိငျသမြ ထှကျအောငျ တှနျးပေးလိုကျ မိသညျ။ အတှအေ့ကွုံမရှိရှာသော ထှေးမှာ လီးကွီး တောငျလာပုံ..ပို၍တငျးမာပွီး.. တဒိတျဒိတျ သှေးခုံနပေုံမြားကို သတိ မထားမိ ရှာပဲ.. ရာဘာလီးအတုဟုသာထငျလကျြ စောကျပတျလေး နှဈဖကျကို အသာဖွဲပွီး..လီးကွီးနှငျ့ တကေ့ာ .. ဖိခြ..လိုကျရှာသညျ…။
“ဗွဈ…အီး….အ…အ..” လီးကွီးထိပျက ..အတနျငယျ ယောငျကိုငျးနသေလို ကွီးထှား၏။ စောကျပတျ အသဈစကျစကျလေးမို့.. စောကျပတျ နုတျခမျးသား နှဈခွမျးကို စုယူ ပွှတျသိပျတာ ထိုးဝငျသှားခြိနျ၌ နှုတျခမျးသား ထူထူနှဈဖတျကွား၌ လီးကွီးထိပျ တဈ နေ သေးသညျ။ အတနျကွာ တငျးခံနပွေီးမှ.. ဗွဈကနဲ ကြှံဝငျသှားသညျ။ ပူနှေးမာကောငျးသော အသားခြောငျး ကွီး က စောကျပတျ လေးထဲသို့ ကွပျကွပျတညျးတညျးကွီး တိုးဝငျသှားစဉျ ထှေးစောကျပတျလေးမှာ .. ခြိုငျ့ဝငျသှား ပွီး ..ခဏအကွာမှာ.. ပုံမှနျပွနျ တကျလာကွ ပွီး..လီးကွီးကို စုပျယူထားသလို..ညဈမိနသေညျ။ စောကျစိမာမာလေး က ဘီဒိုအပေါကျ နှုတျခမျးနှငျ့ ဖိကပျပှတျသပျ မိသညျ အထိ ထှေးက ဖိကပျထားကာ နာကငျြခွငျး ထူးခွားစှာ အီစိမျ့ ခွငျး ဝဒေနာ အရသာမြားကို စုပွုံခံစားရရငျး.. မကျြလုံး ကလေးမှေးကာ ..ဘီဒိုကွီးတှငျ တပျထားသော ရမျဘို ရငျ အုပျကွီးနှးဈဖကျကို လကျဝါးလေးနှငျ့ ပှတျသပျခါ ဖွေးဖွေးခွငျး… စောကျခေါငျးထဲသို့ လီးရောကျသညျအထိ ဖိခြ နေ သညျ။
ဘီဒိုအတှငျးမှ နောငျလတျမှာ ဖျေါမပွတတျလောကျအောငျ ဖငျစအိုနှငျ့ လီးအရငျး၌ ဆကျစပျဖွဈပျေါနသေော ကာ မအရသာကို အံ ကွိပျရငျး အသံမထှကျမိစရေနျ သတိထားနရေသညျ။ ဘီဒိုတံခါးကွီး ဆှဲဖှငျ့ပွီး.. ထှေး အား အား ရပါးရကွီး ဖကျခါ.. ဆှဲလိုးခငျြစိတျ မြားမှာ တဖှားဖှား ပျေါပေါကျလာလသေညျ။ ထှေးက စောကျခေါငျးအတှငျး.. ဖွဈ ဖွဈညဈစှာ တဆတျဆတျ တုနျနသေော လီးကွီး ကို အသာအယာလေး ဖွေးညငျးစှာ…ဆှဲခြှတျလိုကျပွနျသညျ။ “ပွှတျ..ပလှတျ..ဗှီ..ပီ..” လီးကွီးက အကုနျကြှတျသှား၏.. စောကျ ပတျလေးနှဈခွမျးက ရှုံ့သှားပွီး နုတျခမျးနှဈစ တငျးတငျးစသှေ့ားမိခါ..အတှငျးမှ.. အရကွေညျလေးမြား ပီကနဲ ပီကနဲ ညဈကြ လာ၏။ လီးကွီးမှာ..အလှနျတရာပငျ မာတောငျနသေညျကို တှနေ့ရေသညျ။ ထှေး..လလေ့ာခွငျး စဉျးစားခွငျးမြား မလုပျနိငျ။ စောကျပတျလေးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ပွနျဖွဲကာ လီးထိပျကွီးနှငျ့ တထေ့ားလိုကျမိပွနျသညျ။ အဆကျတညျး..လဲ ဖငျသားကွီးမြား.. ကြုံ့.. ကြုံ့သှားအောငျ အားစိုကျဖိခလြိုကျလေ သညျ.။
“ဗွှတျ…ဘှတျ…ဘှတျ..အီး…အ…အား.. ကြှတျ ကြှတျ..” သညျတဈခြီ မိမိဖာသာ အဆောငျ့ကွမျးမိသှားသဖွငျ့ စာကျခေါငျးနံရံ တဈဖကျကို ခပျကွမျးကွမျး ဖိထောကျမိ သှားပွီး..ပေါငျရငျး တဈဖကျကငျြတကျသှားသညျအထိ နာသှားလရော..ထှေး…ရှုံ့တှပွီး မကျြရညျလေး ..ဝိုငျး သှား၏။ ကွှကျသား အဖုအထဈကွီးမြားဖွငျ့ စိတျလှုပျရှားဖှယျရာ ထှားကွိုငျးသနျမာလှသော ရမျဘိုပုံကွီးနှငျ့ နုထှေး သော ပါးပွငျလေးကို အပျခါ.. တအငျး..အငျး..ဝဒေနာလေးခံစားရငျး.. တှနျ့လိမျနသေော ထှေး၏ လှုပျရှားမှုမှာ..မွငျ ရသူ တဈစုံတဈယောကျသာ ရှိပါက အလှနျအမငျး ခဈြစရာ အမူအယာလေး ဖွဈလို့နပေလေိမျ့မညျ။ လကျဝါးလေးနှဈဖကျက ဘီဒိုကွီး တံခါးတှငျ ကပျထားသော ရမျဘိုပုံ ပိုစတာကွီးကို ဟိုမှ သညျမှ ရှလြေ့ား ပှတျ သပျနပွေီး..တဆတျဆတျ တုနျခါနသေော ကိုခန်တာ လေးက ဝဲမှယာ..ယာမှ အထကျ..အထကျမှ အောကျ..ပုံစံအမြိုး မြိုးပွောငျးကာ.. ဖငျလေးတှေ…ဝိုကျတှနျ့ဆော့ကစားသှားပုံမှာ အနုပညာ မွောကျလှသော ခံစားမှုပုံဖျေါသညျ့ လှုပျရှားမှုလေး ဖွဈနပေရော.. ကာမအရသာ၏ ကွီးမားသော စှမျးအငျကွီး အုပျစိုး လှမျးခွုံနပေုံမှာ သိသာထငျရှား လှသညျ။ ပြိုမွဈသော ထှေး၏ အတှအေ့ကွုံ နုနုလေးကွောငျ့လညျး လီးအစဈကို အတုဟုထငျ ကာ မှုံရီဝိုးတဝါးမီး ရောငျအောကျ၌ လှုပျရှား ပွုမူနမေိသော မိမိအဖွဈကိုလညျး ယခုတိုငျ ထှေး…မသိရှာပါလေ။ တအငျ့အငျ့… တအိအိ ငွီးညူသံလေးက တိတျဆိတျသော ညယံကို ထှငျးဖေါကျ၍ တိုးတိုးညှငျးညှငျးလေး ပြံ့လှငျ့ နပေရော.. အပွငျမှ..တဈစုံ တဈယောကျကသာ ကွားမိပါက ဖိုမ.စုံတှဲ ..အပေးအယူမြှစှာ ဖွုတျနကွေသညျဟု သာ ထငျကွပမေညျ။
“အငျး..ဘှတျ…အငျး…အငျး…ပွှတျ…ဘှတျ… အငျး…အ…” ဖွေးဖွေးခငျြး….လေးလေးမှနျမှနျ ထှကျပျေါနသေော လီးကွီး အဝငျအထှကျအသံ…ထှေး၏ ညီးညူသံလေးမြားမှာ မထငျရှားသော အရောငျမှုံဝါးဝါး၌ စိတျကယောကျခွောကျခွား ဖွဈခငျြစရာ ..ထှကျပျေါနတေော့သညျ။ နောငျလတျ ကငျြခြောငျးထဲမှ ဖွိုးဖွိုးဖငျြးဖငျြး ခံစားလာရသညျ.. လီးထိပျက စောကျခေါငျးအတှငျးပိုငျး သားအိမျအဝကို ဒုတျ ကနဲ..ထိုးမိသှားတိုငျး.. နောငျလတျမှာလညျး.. အီစိမျ့သှားအောငျ ခံစားနရေလသေညျ…။ “ဟှနျး..အခုမှ ၂ နာရီ ရှိသေးတယျ…ကိုယျပွနျအိပျလိုကျအုံးမယျကှာ…မခေိုငျ” “ကိုယျတော့ …အိပျလို့မရတော့ဘူး..ဟိုဟာကွီးကို မွငျနရေတာ.. စိတျ လှုပျရှားလိုကျတာ” မခေိုငျက မကျြနာလေးကို တဈခကျြပှတျပွီး ပွောလိုကျသညျ။ ယုနှယျက ဘီဒိုအပေါကျကွီးထဲမှ ထိုးထှကျနေ သော ရျောဘာလီးကွီးကို သသေခြောခြာကိုငျကွညျ့ရငျး.. “မမထှေး..ဘယျလိုလုပျလဲ မသိဘူး.. ခွောကျကပျနတောပဲ..” “အဲဒါ ကွီးက …ခွောကျခငျြ ခွောကျမယျ…. ကွမျးပျေါမှာလညျး ကွညျ့ပါဦး..ပုံနတောပဲ…” မှနျပါသညျ…ကွမျးပွငျပျေါ၌ သုတျရေ အဖတျ အဖတျမြား ပုံနသေညျ။ ယုနှယျက သူမ စောကျဖုတျလေးကို ခပျရှရှ လေးပှတျရငျး စောကျစိလေးကို ညဈပေးလိုကျပွီး လီးနုတျခမျး လေးကို လြှာဖွငျ့ယှကျ လိုကျသညျ။ နောငျလတျ အပွငျမှ အခွအေနကေို ဘာမှ မမွငျရဖွဈနပေရော ရောဘာလီးကို ပွနျထုတျပွီး သူ၏လီးကွီးကို ပွနျပွီး စှပျထား လိုကျသညျ..။ ယုနှယျက လကျဖဝါးလေး နုနုဖွငျ့ လီးကွီးကို ပှတျသပျကိုငျတှယျ လိုကျရာ ထူး ထူးခွားခွား ပူနှေး နပွေီး စေးထနျးနသေညျကို တှလေို့ကျရလသေညျ..။
“မခေိုငျ…ခ..ခဏ..လာအုံး..” ယုနှယျက …လီးကွီးကို ခပျတငျးတငျ ဆုပျထားပွီး မခေိုငျ့အား ချေါလိုကျသညျ..။ လသေ့လေးဖွငျ့ အရေးတကွီး အမူအရာဖွငျ့ ချေါသဖွငျ့ မခေိုငျ ကုတငျပျေါမှ လူးလဲထကာ…ယုနှယျအနားသို့ တိတျတဆိတျခဉျြးကပျလာ၏။ “ဒါ ..ရျောဘာလီးမဟုတျဖူး…တှလေ့ား.. ကိုငျကွညျ့….” မခေိုငျနားဝသို့ ယုနှယျက ကပျပွီး ပွောသညျ။ မခေိုငျမကျြလုံးလေးပွူး သှား၏။ အကွောအပွိုငျးပွိုငျးနှငျ့ သှေး ကွောကွီးမြား ဖေါငျးကားနကော.. ဒဈကွီးပွဲလနျနသေော လီးအစဈကွီးကို မကျြဝါးထငျထငျ တှလေို့ကျရ၏။ “အသာနေ..” ယုနှယျက..လီးထိပျကို လြှာဖြားလေးဖွငျ့ တဈခကျြယကျလိုကျ၏။ လီးကွီးဒ ဆတျကနဲ.. ဆတျကနဲ..တုနျခါသှား၏။ နီစှေး ဝငျးလကျနသေော နှုတျခမျးလေး နှဈမှာဖွငျ့ လီးဒဈကွီးကို အာငှနှေ့ေးနှေးလေးဖွငျ့ ငုံခဲ ပွီး ပွှတျကနဲ စုပျပေး လိုကျရာ..လီးကွီးမှာ…သိမျ့သိမျ့ခါပွီး..လီးထိပျကွီး အရောငျလကျသှားအောငျ တငျးတောငျ သှားသညျကိုတှေ့ လိုကျရလသေညျ..။ မခေိုငျက …ဘယျနှယျ့လဲ..ဟူသော သဘောနှငျ့ မေးစလေ့ေးဆတျပွီး မကျြခုံးပငျ့ပွီး မေးဟနျ ပွုသညျ..။ ယုနှယျက လကျဝါးကလေး ကာပွပွီး..လီးကွီးကို အဆုံးထိငုံခဲကာ လြှာအပွားလိုကျ..စုပျယူပွီး လီး အရငျးထိ ပါးစပျကို ဆောငျ့ခြ ကာ… အပျေါသို့ အားသနျသနျလေး စုပျယူပွဈလိုကျလသေညျ။
ထိုအခါ လီကွီး မှာ ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျဖွငျ့ ဟနျမဆောငျနိငျတော့ပဲ…သိသိသာသာကွီး.. ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ ထောငျသှားလတေော့ သညျ.။ စိတျခရြလောကျအောငျ စမျးသပျပွီးနောကျ …ယုနှယျက ဘီဒို တံခါးကို ဆတျကနဲ ဆှဲဖှငျ့လိုကျလသေညျ။ “ဟငျ…ရှငျ… ရှငျ…ကိုနောငျလတျ..” မိနျးကလေးနှဈဦးမှာ..ထိတျလနျ့အံ့သွောစှာ ရရှေတျမိလိုကျကွလသေညျ။ နောငျလတျမှ ဘီဒိုတံခါးဖှငျ့ လိုကျ သညျ နှငျ့ ပေါကျဝိုငျးလေး အတှငျးမှ လီးကွီးကြှတျခါ..ဘီဒိုအတှငျး ၌ လီးကွီး မတျတောငျလကျြသား မိသှား လသေညျ။ “ရှငျ…တျောတျော..အကငျြ့ယုတျပါလား.. ဟငျ.. ကမြတို့.. ရပျကှကျကို အျောလိုကျရမလား…ပွော..” “မ..မ..လုပျပါနဲ့ မခေိုငျ ရယျ..ကိုယျ.. မငျးဆီကို လာတာပါ.. ဟိုတဈယောကျဝငျလာလို့.. လနျ့ပွီး ဒီအထဲ ဝငျနမေိတာပါ..” “အျော..ဒါနဲ့ပဲ …ထှေးကို ရှငျလုပျ လိုကျရပွီး…ကမြတို့ကိုပါ…” “ကိုယျ…ကိုယျပွောပါရစေ …မခေိုငျ..” “ထှကျ…အခုထှကျခဲ့…ရှငျလူယုတျမာ…” “ကိုယျ…မခေိုငျ့ကို ခဈြလှနျးလို့..” “တျောစမျးပါရှငျ…ရှငျ..ဆူဆူညံညံဖွဈသှားမှာကို လိုလားသလား…ကိုနောငျလတျ..” “ဟာ…မလိုလားပါဘူး ဗြာ..” “ဒါဆို…ကမြတို့ခိုငျးတာ…ရှငျ..လုပျပေးရမယျ…” “လုပျပါ့မယျ….လုပျပါ့မယျ…မခေိုငျ.. ကွိုကျတာခိုငျးပါ…”
မခေိုငျက… ဟနျဆောငျပွုံးလေး ပွုံးလိုကျပွီး…ယုနှယျကို မကျြစောငျးလေးထိုး၍ ကွညျ့လိုကျသညျ…ယုနှယျက ခိုငျး ပဈဆိုသော အဓိပ်ပါယျနှငျ့ အံကွိတျခါ မေးငေါ့ပွလိုကျသညျ။ မခေိုငျက သပေတေော့.. အမူယားလေးဖွငျ့ အံလေး ကွိတျ နှုတျခမျးလေး ကိုကျခါ အတှငျးခံ ဘောငျးဘီလေးကို ခြှတျလိုကျ၏။ ဝငျးလကျ ကဈြလဈသော ခါ အ ထကျ ဆီမှ မာတောငျလကျြရှိသညျ့ နိ့လေးနှဈလုံးမှာ တုနျခါသှား သညျ။ ဖေါငျးကားနသေညျ့ စောကျဖုတျ အထကျ ပိုငျးလေးက အကှဲကွောငျးလေးကို မမွငျရသေးဘဲ တဈရဈတငျးပွောငျ နသေညျ…။ ပွနျ့ကား ကွီးမားသော ပေါငျ လုံးကွီးမြားက စောကျဖုတျကလေးကို ညှပျထားသလို ပြောကျကှယျနသေညျ။
နောငျလတျ..ပုခုနျးကွီးကို..မခေိုငျက အသာအယာကလေး ကိုငျလိုကျသညျ။ စူးလကျသော မကျြဝနျးကလေးမြား က နောငျလတျ မကျြလုံးမြားကို ပူလောငျသော အာသာ ဆန်ဒမြားနှငျ့ စူးစိုကျကွညျ့နသေညျ။ နောငျလတျက ဝနျး ဝိုငျး နကျမှောငျသော မခေိုငျ့ မကျြဝနျးမြားကို စူးစိုကျခါကွညျ့ရငျး မကျြနှာနှဈခု နီးကပျလာသညျ။ တဈယောကျ ထှကျသကျကို တဈယောကျ ရှုရှိုကျမိလာသညျ။ မခေိုငျ အသကျရှုသံလေး ပွငျးလာသညျ။ ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲ ဆတျဆတျခါနသေော နောငျလတျ လီးကွီးက မခေိုငျ၏ ဝမျးဗိုကျ သား ဖှေးဖှေးလေးကို တိုး ထောကျမိနေ၏။ ပူပူနှေးနှေး လီးထိပျကွီးက မခေိုငျ့ တဈကိုယျလုံးကို ကငျြစကျနှငျ့ တို့လိုကျသလို…တုနျ တကျသှာ စပွေီး..ခြှဲကြိနသေော လီးထိပျကွီးနှငျ့..မိမိဗိုကျသားလေးမြား ပူးကပျသှားသညျအထိ နောငျလတျ ရငျခှငျ အတှငျး သို့ ပူးကပျ တိုးဝငျးမိလိုကျလသေညျ။
ယုနှယျက မခေိုငျနှငျ့ နောငျလတျ နှဈယောကျတို့၏ အပွငျးအထနျ စိတျလှုပျရှားနကွေပုံကို ဘေးမှကွညျ့ကာ စောကျပတျ အကှဲ ကွောငျးလေးကို လကျခလယျဖွငျ့ မြှငျးမြှငျးဖှဖှလေး ပှတျသပျပေးနမေိလသေညျ။ နောငျလတျ က မခေိုငျ၏ နုတျခမျးလေးမြားကို မထိတထိလေး ငုံစုပျပွီး လြာဖြားလေးဖွငျ့ မခေိုငျ့ ပါးစပျထဲသို့ထိုးသှငျး ကလိ ပေးလိုကလသေညျး။ မခေိုငျ မကျြတောငျကလေး မြား မှေးစငျးကာ မကျြလုံးလေး စုံမှိတျကသြှားသညျ။ နောငျလတျ လကျတဈဖကျက မခေိုငျ့နိ့လေးတဈလုံးကို ဆုပျကိုငျကာ နိ့သီး ခေါငျးလေးကို ပှတျခပြေေးလိုကျ၏။ မေ ခိုငျ …အငျ့…အငျ့…ကနဲ…ခန်ဒာကိုယျကလေး ကော့ပြံတကျသှားရသညျ။ မခေိုငျ့ လကျ ကလေးတဈဖကျ က လညျး နောငျလတျ လီးကွီးကို ခပျတငျးတငျးလေး ဆုပျကိုငျလိုကျပွီး ပှတျခနြေမေိသညျ။ ပွငျးပွသော အသကျ ရှုသံမြားက လှတျလပျကယျြလောငျစှာ ထှကျပျေါလာသညျ။ မခေိုငျက ကုတငျစှနျးတှငျ နှမျးလြှစှာ ထိုငျခလြိုကျသညျ။ နောငျလတျက ဒူးထောကျပွီး မခေိုငျ့ နိ့လေးနှဈလုံးကို ခပျဖှဖှလေး စို့ပေးနရော မခေိုငျ့ မကျြနာလေးမှ ..မုနျတိုငျးမိသော ဌကျငယျ လေးပမာ ဘယျညာ ခါရမျးပွီး “အား…အ…ဟငျး…ကြှတျကြှတျ…” အလှနျအမငျး ခံရခကျစှာ ငွီးငွူလိုကျရှာလသေညျ။ မခေိုငျ့ လကျနှဈဖကျက ကုတငျပျေါသို့ နောကျပွနျထောကျ ထားပွီး..ရငျလေးကို ကော့ပေးထားရှာသညျ။ ဆံနှယျ မှောငျမှောငျလေးမြားက လထေဲ၌ ဝဝေဲ့ လှငျ့ပြံတကျနေ၏။ ခပျပွဲပွဲလေး ကားပေးထားသော ပေါငျနှဈဖကျကို နောငျလတျက အားပွုကိုငျရငျး ပှတျသပျ ပေးသညျ။
တဖငျြးဖငျြး နှငျ့ သှေးကွှလာသော ကာမဆန်ဒက ခြျောရညျ အပွညျ့နှငျ့ မီးတောငျကွီး မပေါကျကှဲခငျ ငလငျြခါသညျနှငျ့ သှကျ သှကျ ခါလာလသေညျ။ မခေိုငျက ကုတငျပျေါ၌ မေးလေးကား ခေါငျးလေးမော့၍ လကျနှဈဖကျ နောကျပဈထုငျ ထားသညျ။ နောငျလတျက ဒူးထောကျခါ မခေိုငျပေါငျရငျးလေးကို ခပျတငျးတငျး နိ့အစုံကို စုပျပနေသေညျ။ နောငျလတျ ပေါငျကွားသို့ ယုနှယျက ပကျလကျ ကလေးလှနျကာ လှဲလြောငျးလိုကျရာ နောငျလတျလီးကွီးနှငျ့ ယုနှယျ နှုတျခမျးလေးမှာ တမေိ့သှားကွလသေညျ။ သုံးယောကျစလုံး မှာ ..ကာမစပျယှကျမှုအတှအေ့ကွုံရှိကွသူမြား မဟုတျသောလညျး..ကွညျ့ဖူးသော ဗီဒီယိုကား နှငျ့ ကွားဖူးနားဝမြားအတိုငျး စညျး ကိုကျ ဝါးကိုကျ စနှဈတကြ ပွုလုပျနမေိကွလသေညျ။ ယုနှယျက မိမိပေါငျကွား သို့ ခေါငျးထိုးဝငျလာသညျနှငျ့ နောငျလတျက ..ပေါငျနှဈလုံးကို ကားလေးလိုကျသညျ။ ပူနှေးသော အာငှနှေ့ေး နှေး ဖွငျ့ စုပျခွငျးကို ခံလိုကျရသော နောငျလတျအတှကျ..ပါးစပျ လေးထဲသို့ မသိမသာလေး ညှောငျ့လိုး လိုကျမိ လသေညျ။
ယုနှယျကလညျး..နောငျလတျ ဂှေးဥကွီးကို ခပျညဈညဈကလေး ဆုပျခပြေေးရငျး..လီးဒဈကွီး ကို သကွားလုံးစုပျသလို တပွှတျပွှတျစုပျပေးလိုကျသညျ။ နောငျလတျလီးမှာ တငျးသညျထကျ တငျး တောငျသညျ ထကျတောငျလာလသေညျ။ သှေးကွော ကွီးမြား ပေါကျကှဲတော့ မယောငျ ဖေါငျးကားလာသညျ။ သှေးတိုးခွငျး ကွောငျ့ လီးထိပျကွီးမှာ ကွီးမားသော ခရမျးခဉျြသီးကွီးအလား..ပွာလဲ့သော မီးရောငျတှငျ ပွောငျလကျတငျးမာ သှားသညျကို တှရေ့၏။ နောငျလတျလီးကို ပကျလကျလှနျက အားရပါးရ စုပျနသေော ယုနှယျ စောကျဖုတျလေးမှာ ခံခငျြလှနျးသဖွငျ့ အရေ လေးမြားစိုရှဲနသေညျ။ စောကျစိလေး မပွုတပွူဖွဈလာသညျ အထိ စောကျပတျ နှဈခွမျးကွားမှ စောကျစိလေးက ထောငျ၍ ထှကျလာသညျ။ ပါးစပျနှငျ့အပွညျ့..ကွီးမားလှနျးသော နောငျလတျ လီးကွီးကို မိမိစောကျဖုတျထဲသို့ လိုးသှငျးခွငျး ခံလိုသညျမှာ မ ထိနျးနိငျအောငျ ဖွဈလာနရေသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မရှကျနိငျတော့ပဲ နောငျလတျ ပေါငျကွားမှ ခေါငျးပိုငျးကို ပွနျထှကျခါ..ခွနှေဈခြောငျးကို သှငျးလိုကျ၏။ ခွနှေဈခြောငျးက မခေိုငျ့ပေါငျပျေါသို့ တငျ လိုကျခါ..ဇောကျထိုးလေးဖွဈသညျ အထိ ကော့ထောငျလိုကျလသေညျ။ ထိုအခါ…ယုနှယျ စောကျဖုတျလေးမှာ နောငျလတျလီးကွီး ရှေ့၌ အလိုးခံရနျ ဇောကျထိုးလေး.. ခပျပွဲပွဲ နရေခပြွီး ဖွဈသှား၏။
နောငျလတျကလညျး ယုနှယျဆန်ဒကို သဘောပေါကျသဖွငျ့..မေ ခိုငျ့နိ့လေးမြားကို စို့ပေးနရောမှ..ခဏ အနားယူပွီး ယုနှယျစောကျ ဖုတျကွီးကို ငုံ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ မခေိုငျက နောငျလတျ လီးကွီးကို အရငျးမှကိုငျပွီး ယုနှယျစောကျဖုတျလေးထဲ တသှေ့ငျးပွီး. . စကျဝိုငျးသဏ်ဍာနျ မှပေေး လိုကျရာ..မခေိုငျ အပွုအမူကွောငျ့… နောငျလတျနှငျ့ ယုနှယျမှာ ထှနျ့ထှနျ့လူးသှားရ လသေညျ။ “ဟာ… ဟား…အီး…အ…အမလေး…အို…အိုး…အီး…” ယုနှယျအျောသံလေးက အတနျငယျ ကယျြလောငျသညျမို့ မခေိုငျက ရှူးကနဲ သတိပေးလိုကျရလသေညျ။ သို့ သျော ယုနှယျက ကွားဟနျမတူ..ခြေ..မွှမေလေး မီးမွိုကျခံရသညျ့နှယျ တှနျ့လိမျကှကေ့ောကျ သှား လသေညျ။ “ရှူး…တိုးတိုး…ယုနှယျ…” “အာဟာ…အီး…အဟငျ့..မရဘူး…မရဘူး…အမလေး..” “ဟာ…ပွသနာပဲ..” မခေိုငျက မသိမသာ ပွုံးရငျး..ငွီးတှားကာ နောငျလတျလီးကွီးကို ယုနှယျ စောကျခေါငျးထဲ အဆုံးထိ ဝငျစရေနျ နောငျလတျခါးကို ဖကျ၍ တ အားပွဈဆောငျ့ခလြိုကျ လတေော့သညျ။
“ပွှတျ…ပွဈ…ပွှတျ…ပွှတျ…စှတျ…စှတျ…ဘှတျ..” စောကျခေါငျးက ထောငျနသေဖွငျ့ လီးကွီးက ကျောပွီး ဝငျနရေသဖွငျ့..တဖကျ သပျပှတျတိုကျပေးသလိုကွီးဖွဈကာ တငျးထောငျနသေော ယနှယျစောကျစိလေးနှငျ့.. နောငျလတျဂှေးဥကွီးတို့က အရှိနျပွငျးစှာ ခု လုတျတိုကျမိနကွေ တော့သညျ။ ယုနှယျမှာ ကွမျးပွငျကို ကြားသဈမလေး သဖှယျ ကုတျခွဈ..ရငျး တအားအား အျောခလြိုကျမိရှာ လေ သညျ။ “နာ ..နာလေးဆောငျ့ပေး…ကိုနောငျ…သူပွီးတော့မယျ…” “အ..အ..အငျ့…အငျ့….အငျ..” “ပွှတျ..ပွှတျ..ဖှတျ…ပွှတျ… ဘှပျ..ဘှတျ…” “အရတှေေ…တ..တအားထှကျတာပဲ…အိ” “မနားနဲ့ ကိုနောငျ..မွညျပစေ့ေ…နာနာလေး.. ဆောငျ့…ဆောငျ့..” စောကျခေါငျးအတှငျး အရှိနျနှငျ့ စိုကျစိုကျဝငျသှားတသော လီးကွီးအရှိနျက ယုနှယျအေား..ဖိနျ့ဖိနျ့တုနျသှားစေ ကာ ပွှတျကနဲ… ပွှတျကနဲ…သုတျရမြေား ပနျးထှကျသှားရရှာသညျ။
“ကိုနောငျ ဟာကွီးက…မပြော့သေးဘူးနျော…” ယုနှယျ စောကျဖုတျထဲမှ.. ပွှတျကနဲ ထှကျလာသော လီးကွီးကို..မခေိုငျက ပေါငျ လေးကားပွီး.. ဒါရိုကျဆကျသှငျး ရငျး ပွောလိုကျသညျ။ ယုနှယျ သုတျရမြေားဖွငျ့..ခြှဲပွောငျလကျနသေော..နောငျလတျလီးကွီးက မာနျမကပြဲ ..မေ ခိုငျ၏ လှပဖေါငျးကားနသေော စောကျဖုတျလေးထဲသို့ ထိုးဝငျသှားလတေော့သညျ…။ “ပွှတျ..ဘှတျ…” “အမ လေး…ကိုနောငျ…ဖွေးဖွေး…ကွပျ.. ကွပျတယျ..” “နဲနဲ…ဖွဲ..ဖွဲပေးထားလေ…မခေိုငျ…အငျ့…အငျ့..” “ရှီး….အ..ကွပျလိုကျတာ… ကိုနောငျရယျ… စောကျခေါငျးထဲကို ပွညျ့သှားတာပဲကှယျ…အငျ့…အဟငျ့…” “ခါးကော့ပေးထား…မခေိုငျ…အငျ့….အငျ့..” “အား… ကိုနောငျ…အီး…သားအိမျကို ထောကျမိနပွေီ…အ….အ…အငျ့.” မခေိုငျ့ အံကွိတျငွီးသံလေးက ညဥျ့ယံကို ထှကျဖေါကျပြံ့လှငျ့သှား လတေော့သညျ…။ ပွီးပါပွီ
နောင်လတ် ပါးစပ်ကြီး ခါးလည်ကို ဖြတ်နင်းခံလိုက်ရသော ကျော်စံကေး ပါးစပ်နှယ် ပြဲသွား၏။ “အားပါး …. အောက်စလွတ်နေ တာကွ..အဟီး” ထိန်ဝင်းနှင့် သန်းရှိန်တို့နှစ်ယောက် .. သံပတ်ပေးထားသော စက်ရုပ်များနှယ် လှုပ်စိ လှုပ်စိ လမ်းလျောက်နေရာ မှ.. နဖားကြိုးအဆွဲခံလိုက်ရသလို.. တုံ့သွားသည်။ ချာကနဲ ခေါင်းနှစ်လုံးက နောင်လတ်ကြည့်ရာသို့ လိုက်ကြည့် ကြသည်။ ထိန်ဝင်း က .. ဟိုက် ကနဲ အော်၏။ သန်းရှိန်က မျက်ကြီးပြူးပြီး…ဂလု ကနဲ တံတွေး မြိုချ၏။ “ပေါ်တင်ကြီး..” သုံးယောက်သား ..လမ်းမ အလယ်မှာ တန်းစီရပ်နေမိကြသည်။ နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကလေးက သားနားသပ် ရပ်သည်။ ပြူတင်းပေါက်များကို ကြည်ပြာရောင် ဇာလေးများ ချိန်ဆွဲထားသည်။ အိမ်ရှေ့နှင့် လူသွားလမ်းကလေး တစ်ခုမျှသာ ဝေးပြီး ခြံကကျဉ်းမြောင်းသည်။ ခေါင်းရင်းဘက်၌ ရေစင်တစ်ခု ရှိ၏။ ရေစင်အောက် ကြိမ်ကုလား ထိုင်လေးပေါ်၌ လှပ ကျော့ရှင်း ပြေပြစ် နုထွား အားပါးပါးကြီး တစ်ယောက်က ဒူးနှစ်ဖက် ပူးထပ်ကာ စာဖတ်နေ သည်။ ပူးထပ်ထားသော ညာပေါင်ရင်းအထိ ထမီလေးက ဟောင်းလောင်း..။ ဖြူ ဖွေးဥနေသော အတွင်းသား အစိုင်အခဲကြီးများကို သုံးယောက်သား အမဲသားသည် ဘေး၌ထိုင်နေသော ခွေးမျက်လုံးမျိုးဖြင့် ဝင်း လက်စွာကြည့် နေကြ၏။
“ပွမ်…ပွမ်..” “စောက်ပတ်ကြီး ..” ထိန်ဝင်းက ယောင်လျင် ..အဲဒါကြီး အမြဲထည့်ယောင်သည်။ ယခုလည်း အနားကပ်တီးလိုက် သော ဟွန်းသံကြောင့် ထိန်ဝင်းက ယောင်လိုက်မိ၏။ နောင်လတ်နှင့် သန်းရှိန်ကြားသို့ ကားဦးက တိုးဝင်လာသည်။ ပြီး..ဟွန်းကို ထပ်တီး လိုက်ပြန်သည်။ “ပွမ်..ပွမ်..” “စောက်ပတ်ကြီး..” ထိန်ဝင်းကလည်း ဝတ္တရားမပျက် ယောင်ပြန်သည်။ နောင်လတ်က ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်နေသော ထိန်ဝင်းကို လှမ်းဆွဲသည်။ ဆွဲမိသည်က ပုဆိုးခပုံစဖြစ်နေလေရာ ပုဆိုးစကြီစက နောင်လတ်လက်ထဲ ပါလာသည်။ အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ဝတ်လေ့မရှိသော ထိန်ဝင်း၏ မဲနက်မှောင်မှောင် ဦးစွန်းဖုတ်ကြီးလို မဲကနဲ ပေါ်သွား၏။ လ မွှေးများ အောက်၌ ငုတ်တိတိ သေးကွေးလှသော ခလေးလီးသာသာလေးကပါ ဘွားကနဲ မြင်ကွင်းထဲ ဝင်လာ၏။
“ဟာ …စောက်ပတ်ကြီး..” သည်တစ်ခါ သန်းရှိန်ကလန့်ပြီး ထခုန်သည်။ ထိန်ဝင်း ပုဆိုးစကို အတင်ပြန်လုပြီး မျက်နာကြီးနီရဲလာ ကာ သန်းရှိန်ကို ဒေါသနှင့်အော်သည်။ “ဘာလို့ ဇွတ်အော်နေတာလဲ .. စောက်ပတ်မှန်း မသိ လီးမှန်း မသိ…တောက်..” အမှန်က ထိန်ဝင်း ရှက်ရမ်းရမ်းခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ကားရှေ့တည့်တည့်၌ မျက်စိနောက်စရာ ရှုပ်ထွေးနေသော သူ တို့သုံးယောက်ကို ကား မောင်းလာသူက စိတ်မရှည်ဟန်ဖြင့် ဟွန်းထပ်တီးလိုက်ပြန်သည်။ “ပွမ်..ပွမ်” “စောက်…အဲ..အဲ..” ထိန်ဝင်း ယောင်မည်ဟု ပါးစပ် ပြင်ပြီးကာမှ ကားထဲကထွက်လာသော မိန်းကလေးမျက်နာကြောင့် အားနာပြီး မ ယောင်ဖြစ်တော့။ “လမ်းလယ်ခေါင်မှာ ဘာလုပ် နေကြတာလဲ” “ကြည့်နေတာ..ဟဲ..ဟဲ..” “ဘာကြည့်တာလဲ…ဟွန်း..” “ဟိုမှာ..အောက်စလွတ်နေတာကို..” “ဘာ…ဘာ ပြော တယ်” ခြံကျဉ်းလေးထဲမှ ထွက်လာသော မချောက စာအုပ်ကို လက်ညိုးလေးညှပ်ကိုင်ရင်း ဝင်မေးလိုက်သည်။ ထိန်ဝင်း လက်ညိုး ကြီးက အလိုလိုနေရင်း သန်းရှိန်နှာခေါင်းကို ထိုးမိသွားသည်။ ကားလေးထဲမှ နောက်ထပ် မိန်းကလေး တစ်ဦး ထပ်ဆင်းလာ ပြန်သည်။
“ဘယ်က တောသားတွေလဲ မသိဘူး..” “မိုးညိုဘက်ကပါ…သိလို့လား.. ဟင်” “ရှင့်ကို ဘယ်သူက မေးနေလို့လဲ…ဘာမှန်းလဲမသိ ဘူး.. ဂယောင်တွေ..” နောင်လတ်က အခြေအနေကို ဝင်ထိန်းရန် ကြိုးစားသည်။ “ဒီလိုပါ.. အဟဲ.. ဒီလိုလေ..” “လာပြန်ပြီ..တစ် ယောက်.. အကုန်လုံးအရူးထောင်က ထွက်လာတာများလား.. မသိဘူး.. ကိုညို ကျေးဇူး..” ကားဒရိုင်ဘာကို လက်ကလေးပြပြီး သုံး ယောက်သား ခြံဝင်းထဲ ဝင်သွားကြ၏။ ရယ်ကျဲကျဲလုပ်ထားသော နောင် လတ်ပါးနှစ်ဖက် တင်းကနဲဖြစ်သွားသည်။ “ပွမ်..ပွမ်..” “စောက်ပတ်ကြီး…ဟာ..သွားစမ်းဗျာ..မြန်မြန်” ထိန်ဝင်း လန့်ယောင်ပြီးမှ ကားဒရိုင်ဘာကို အော်လိုက်၏။ ဒရိုင်ဘာကြီးက ..ပွမ် ကနဲ တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပြီး.. “မင်းယောင်တာ ..နားထောင်ကောင်းလို့ပါ.. ဟား.. ဟား..ဟား….ဟား…” “တောက်…အရေးထဲ” ကားမောင်းထွက်သွားသည်။ နောင်လတ်က အိမ်အပေါ်ထပ်သို့တန်းစီတက်သွားသော.. ဖင်ဝိုင်းဝိုင်းလေးများကို အသေအချာလိုက်ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းချသည်။
“တော်တော် အပေါက်ဆိုးတဲ့..ကောင်မတွေ..” “အေးကွ..အပေါက်ဆိုးမယ်ထင်တယ်…အပေါက်..” “ဘာအပေါက်လဲ…မင့်ဟာ က” “စောက်ပေါက်လေကွာ.. လုံချည်ကျွတ်လို့ မျက်နာဘယ်ထားရမှန်း မသိရတဲ့အထဲ..” “ဟိုမှာ သွားထားပါလား..” “ဘယ်မှာ တုန်း..” “အပေါင်..ဆိုင်..လေ..” နောင်လတ် ထိန်ဝင်းနှင့် သန်းရှိန်တို့မှာ သက်တူရွယ်တူ (20) ဝန်းကျင် လူငယ်များဖြစ်ကြသည်။ နောင်လတ်က ကမာရွတ်ဝပ်ရှော့တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ဝါသနာပါရာ ဂီတအနုပညာဘက်ကို တိုးဝင်နေသူ ဖြစ်သည်။ ထိန်ဝင်း က တွံတေးသား..မိဘပိုင် မာလကာခြံတွေကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေရင်း စာပေလောကကို လာနင်းနေသူ.. သန်းရှိန်က စီးပွားရေးသမား..အားလုံး..စုမိ..ဆုံမိကြသည်။ အိမ်တစ်လုံးကို စုငှားကြသည်။ နေကြသည်။ စိတ်တူကိုယ်တူ အိပ် စားအတူ..သွား အတူ နောက်ဖေးသွာလျင်သာ ကွဲပြားသွားကြသည်။
နောင်လတ်တို့သုံးယောက် ..မကြာခဏ အလုပ်ပိတ်ရက်ဆုံကြပြီး..ရုပ်ရှင်ကြည့်.. ကြေးအိုးသောက်..တစ်ခါတစ်လေ အပြာကား ကြည့်.. ဘီယာသောက်.. ယခုလည်း အပြာကားကြည့်ပြီး ပြန်လာခြင်းဖြစ်ရာ အရှိန်မသေသေးခင် အောက်စကလေး ပေါ်နေသော မချောလေးကို ငေးမိကြခြင်းဖြစ်သည်။ သည်ရပ်ကွက်၌ နောင်လတ်တို့ နေခဲ့ကြသည်မှာ သုံးနှစ်နီးပါးရှိလာပြီး သည်လမ်းကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်း သွားလာခဲ့ဘူးကြသည်။ သည်မချောလေးများကို သည့်နေ့မှ စတင်တွေ့မိကြခြင်းအတွက် သူတို့သုံး ယောက် အံ့ သြောကြ၏။ နောင်လတ်နှင့်ထိန်ဝင်းက သည်ကိစ္စကို အလေးနက် ဆွေးနွေး၏။
“အဆန်းတကျယ်လုပ်လို့ကွာ..မင်းတို့ကလဲ . ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့.. နယ်က ကျောင်းလာနေကြတာ ဖြစ်မှာ ပေါ့ဟ..” သန်း ရှိန်တွေးသော အတွေးကို နောင်လတ်နှင့် ထိန်ဝင်းလုံးဝ မတွေးမိကြ…ပညာရှိ သန်ရှိန်ကို အထင်ကြီးမိကြသည်။ “သုံးရက် အတွင်း..မှတ်ပုံတင်နံပတ်နဲ့ မိဘ.. အမည်.. အတန်း..နေရပ်..လိပ်စာတွေ အတိအကျ ရစေရမယ်” အရှိန်ရသွားသဖြင့် သန်းရှိန်က ဘယ်သူမှ တာဝန်မပေးပဲ မဟာတာဝန်ကြီးကို အလုအယက် ယူသည်။ ပြီးမှ လည် ချောင်းဝ၌ အရိုးကန့်လန့် ခံနေသော မျက်နာကြီး ဖြင့်… “ဟို…အဲ…တစ်ယောက်ထဲတော့.. လွတ်မထားနဲ့လေ” ဟု ဆို၏။ “ကဲ..ဒါဆို..ခွဲတမ်းချမယ်..” “ဘယ်လို..ခွဲတမ်းချမှာလဲ ဟ..” ထိန်ဝင်းက လျောက်နေသော ခြေလှမ်းများကို ရပ်လိုက်၏။ ထူထဲသော မျက်ခုန်းနှစ်ဖက်ကို ကြုတ်လျက် စဉ်းစား ဟန်ပြုပြီး ခါးကို ထောက်လိုက်သည်။
“ငါက…ကားပေါ်က ပထမဆင်းလာတဲ့ ဟာမလေးကို အင်ထရက်စ်ဖြစ်တယ်..မင်းကရော နောင်လတ်..” “ဟို…စာဖတ် ရင်း..အောက်စလွတ်နေတဲ့.. ဟာမလေးကွာ..” နောင်လတ် မဆိုင်းမတွ ဖြေလိုက်သည်။ “အား..ဒါဆို…ဒုတိယ ကားပေါ်ကဆင်း လာတဲ့ …စကီလေးကွာ” “အေး..ဒါဆို..အဝေမျှတယ်..ဒီတော့.. ကိုယ့်ဆော်နာမည်… ကိုယ့်ဖာသာစုံစမ်းကြေး.. ဘယ့်နှယ့်လဲ” “အို…စိန်လိုက်” စိန်လိုက် ဟုအော်လိုက်သော ထိန်ဝင်းနှင့် သန်းရှိန်အသံက အားရပါးရ ရှိသဖြင့် ကျယ်လောင်သွားသည်။သူတို့ အနောက်မှ အမဲရိုးတစ်ချောင်းကို ကိုက်ချီလာသော ခွေးပင် ကိန် ကနဲ လန့်အော်ပြီး..ထွက်ပြေးသည်။ အမဲရိုးက ထိန်ဝင်း ခြေထောက်နားတွင် ကျန်ရစ်သည်။
“လီးမှပဲ…ခွေးတောင်လန့်ပြီး..အမဲရိုးကျန်ခဲ့ပြီ..” “ဒါ…နောက်ဆုံးထွက်တာ..အစ်ကိုရ.. မိန်းကလေးတွေတောင် ငှားတယ်” “ဘာ စာအုပ်လဲ…ပြစမ်းပါဦး” “အချစ်ခွဲတမ်းလေ…ပီပြင်တယ်..” ထိန်ဝင်းက စားအုပ်အငှားဆိုင်လေးမှ ချာတိတ်လေး ထိုးပေးသော စာအုပ်လေးကို ဟိုလှန် .. ဒီလှန်လျောက်ဖတ်ရင်း..မျက်လုံးပြူးပြ၏။ “ဟီး..ဟီး…မိုက်တယ်ဟ…အဟေး..ယူသွားမယ်” “တစ် ရက်ပဲနော် ..အစ်ကို..”“အေးပါ…နောက်နေ့ အပြီးဖတ်မှာပါ..” “ပြီးမှပဲ…လက်ကချချင်တဲ့ စာအုပ်ဗျ…ရသ.. စာပေထဲမှာတော့ ..ဒီ စာရေးဆရာက.. သန့်တယ် အစ်ကို.. ဗလာချီ လျောက်ရေးနေတာ မဟုတ်ဖူး.. ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ကျောရိုးယူထားတာ..ဗျ.” “အချစ်ခွဲတမ်း …ပြန်ရောက်ပလား..ဟင်..” “သောက်ပလုတ်တုတ်..” ထိန်ဝင်းက အလန့်တကြား အော်ရင်း လှည့်ကြည့်လိုက် သည်။ ထိန်ဝင်း စိတ်ထဲ၌ ဟ… နောင်လတ် စော်လေး ဟု ရေရွတ်လိုက်၏။
“မ…မရောက်သေးဘူး..မမလေးရဲ့..” “ပြန်ရောက်ပြီးတာကို …နင်..ထပ်ငှားလိုက်တယ်.. မှုတ်လား” မချောလေးက စွာပုံရ သည်..ထိန်ဝင်းလက်ထဲက…စာအုပ်ပါးလေးကို ဘယ်ထားရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်သွားသည်။ “ငါ..လစ်ပြီ” ထိန်ဝင်းက စာအုပ်ငှား သမားလေးကို မျက်စပြစ်ပြလိုက်ပြီး.. အလျင်အမြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် သတင်းထူး တစ်ပုဒ်ရလိုက်သော ထိန်ဝင်း ရင်တွေခုန်နေသည်။ “နောင်လတ်…မင်းစော်လေးက…စာအုပ်လာငှားတယ်ဗျား..” “စာအုပ်လာငှားတာ…..အဆန်းလား ဟ.. ထိန်ဝင်းရ” “မှုတ်ဖူးဟ…သူငှားတာ..ဒီ စာအုပ်..” “ဟေ…” နောင်လတ်နှင့် သန်းရှိန်က “အချစ်ခွဲတမ်း” စာအုပ်လေးကို ..ကြည့်ရင်း ပြိုင်တူအော်လိုက်သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် ဝထ္တုစာအုပ် သုံးလေးအုပ်ကိုင်ကာ.. လမ်းထိပ်မှ ပြန်ဝင်လာသော စွာတေးလေး ကို တွေ့လိုက်ကြရသည်။ “လာနေပြီ..မင်းလိုက်ရွှီးပါလား…နောင်လတ်..” “ဟာ..ဘာအင်ထရိုမှ မဝင်ရသေးပဲ.. ဖြစ်ပါ့မလားဟ..”
“ဖြစ်ပါတယ်..တစ်နေ့ကကိစ္စကို တောင်းပန်ပေါ့..” “ဟုတ်သားပဲ..မင်းကလဲ..ကြောင်နေပြန်ပြီ” ထိန်ဝင်းက ပင့်ပေးသလို သန်းရှိန် က မြှောက်ပေးသည်။ နောင်လတ် ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာသည်။ ခြေဖျား လက်ဖျားတွေ အေးချင်ချင်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် သူငယ်ချင်းများ အထင်သေးမှာလည်း စိုးသေးသည်။ “အေး..ငါလိုက်ရွှီးအုံးမယ်..” နောင်လတ် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲမှ သွက်လက်သော ခြေလှမ်းများဖြင့် ထလိုက်သွားသည်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် မှ သီချင်းသံက ကျယ်လောင် စူးရှလွန်းလှသည်။
“ညီမ..” နောင်လတ်..မချောလေးနောက်မှ အသံပြု၏။ လှပဝိုင်းစက်ခါ တင်းကားနေသော တင်ပါးဆုံ လုံးလုံးလေးများက စည်း ချက်မှန်မှန် တက်လိုက် ကျလိုက် သွားနေသော ချာတိတ်မလေးက.. မကြား.. သွားမြဲသွားနေသည်။ နောင် လတ် ရင်တွေ ပို၍ ပို၍ အခုန်မြန်လာသည်။ အသံကိုမြင့်ပြီး ထပ်ခေါ်လိုက်သည်။ “ညီ..မ…” အသံက တုန်ခပ်နေသဖြင့် တိုးတိတ်လွန်းနေ၏။ ပျော့ပျောင်း နက်မှောင်သော ဆံနွယ်လေးများ ဖွားကနဲ ဖွားကနဲ နောက်သို့လွင့်ကျန်ရစ်အောင်ပင် မချောလေးက ခြေလှမ်းမြန်၏။
“ညီမလေး…” အနားကပ်ပြီး..သူခေါ်လိုက်သည်။ “အို..” ကောင်မလေး တစ်ကိုယ်လုံး တုန်လှုပ်သွားသည်။ တစ်ဖက်သို့လည်း ကိုယ်လေးယို့သွားပြီး မျက်မှောင်ကုတ် ကြည့်၏။ နောင်လတ် ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ ရယ်ပြလိုက်သည်။ “ဘာလဲ..သွား စစ်ဆေးခိုင်းနေတာလား.. ကျမ သွားဆရာဝန် မဟုတ်ဘူး..” “ဟာ..မဟုတ်ပါဘူး..ရီပြတာလေ..” “ဘာကိစ္စ..အဖြူထည်ကြီး..ရီ ပြတာလဲ.. မလိုပါဘူး..” “ဟိုဥစ္စာ…ဖြစ်လို့ ရီပြတာပါ” “ဘာ..ဥစ္စာလဲ..ဟွန်း..မသိဘူး.” နောင်လတ် အကျဉ်း အကြပ်သို့ရောက် နေသည်။ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ..ဘာလုပ်၍ ဘာပြောရမှန်းမ သိ.. အစ စဉ်းစားထားသမျှလည်း ခေါင်းထဲမှ မပေါ်ဖြစ်နေ ရသည်။ “အော်..ဟိုဒင်း…ကျွန်တော် တောင်းပန်ချင်လို့ပါ..” “ရှင့်ကို ကျမ ပိုက်ဆံချေးထားတာမှ မဟုတ်ပဲ” စွာတေးက သရော် ပြုံးနှင့် တစ်လုံးမကျန် ခလျော်တုတ်ပြစ်နေ၏။
“ကိုယ်..အကောင်းပြောတာပါ..ဟိုတစ်နေ့က ကိစ္စ တောင်းပန်ပါတယ်..” “အိုး..ဘယ်ကိစ္စလဲ..ခင်ဗျားလာမရစ်နဲ့နော်..” စွာတေး က စွာလွန်းသဖြင့် နောင်လတ် ကျွတ်နေသည်။ “မှတ်ထား..ရီးစားစကားပြောတာ.. ဒီပုံတွေနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ.. အာပလာလုပ်တဲ့ ခေတ်က ဟိုး နိင်တီးပွိုင့်တီးမှာ ကျန် ခဲ့ပြီ..သွားတော့” “ဟုတ်ကဲ့…ဟုတ်ကဲ့..” နောင်လတ် အကြီးကျယ်ဆုံး ကျရှုံးသွားသည်။ လူလည်ခေါင်မှာ..ခွေးချီး နင်းမိသော မျက်နာကြီးဖြင့် မအီမသာ.. တပ်ခေါက်ပြန်ခဲ့ရသည်။ “လာ…ဒီက..လာကြည့်..တွေ့လား… အပီအပြင်ပဲ..” ထိန်ဝင်းက လက်ထဲက အားကောင်းလွန်းသော ရေကြောင်းသုံး မှန်ဘီလူး အလေးကြီးကို နောင်လတ် လက်ထဲ ထည့်ရင်း ပြောသည်.။ နောင်လတ် မှန်ဘီလူးကို ယူပြီး ထိန်ဝင်း ညွှန်ပြရာသို့ ကြည့်၏။
“ဟား…ပိုင်တယ်ကွာ..ထမင်းမစားပဲ ဒီပြူတင်းပေါက်က.. တစ်နေကုန် ထိုင်ကြည့်ဖို့ကောင်း တယ်..” လည်တိုင် ကျော့ကျော့လေး ကို မော့ထား၏ ။ဖားဝေသော ဆံနွယ်လေးများကို စုစည်းသိမ်းတင်ရင်း ရင်လျားထမီ လေး မောက်ကြွလာသည်အထိ ခါးကိုဆန့် လိုက်သည်..စွံ့စွံ့ကားကား တင်ပါးကြီးများက ခုံပုလေးပေါ်၌ ပုံ့ပုံ့ အိ အိ လေး ရှိနေ၏။ ထိန်ဝင်း..လက်နှစ်ဖက်ကို ပွတ်ရင်း ဝါကြွား လာသောလေသံနှင့် ရယ်ရင်းပြောသည်။ “ဦးဏှောက်ဆိုတာ..လွှာသုံးရတယ်ကွ.. မှတ်ထား ..ဟဲ..ဟဲ” “တော်ပါပေတယ်..ကို ထိန်ဝင်းရယ်.. တကယ်ပါဗျာ..” “ဟဲ..ဟဲ..မချီးကျူးနဲ့.. မနေတတ်ဖူးကွ.. ဟီး..ဟီး..” နောင်လတ် မျက်လုံးများကို မှန်ဘီလူးနှင့် ပြန်တပ်၏။ “ဟ..ဘာကြီးလဲ..” ရုတ်တရက် နောင်လတ်သည်.. အထူးစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်လည်း ပြူတင်းပေါက်မှ ကျွံကျသွား မတတ် ကုန်းကြည့် ၏။ “ဟယ်..အယ်နေတာပဲ..ဟိဟိ.. ရှာတတ်တယ် ကြံကြံဖန်ဖန်..” မမခိုင့်လက်ထဲမှ..ရာဘာလီးအတုကြီးမှာ ကြီးမားပြောင်လက်နေသည်။ မေခိုင်က..ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နာဖြင့် လီး ထိပ်ကြီးကို လျာထိပ်လေးဖြင့် ထိုးပြသည်။ တဝက်ခန့်အထိ လည်း ပါးစပ်ထဲ ငုံ၍စုပ်ပြလိုက်ရာ မှန်တင်ခုံတွင်ထိုင် နေသော ယုနွယ်မှာ တသိမ့်သိမ့် ဖင်ဆောင့်ပြီးရယ်သည်။
“ကောင်မ ဘယ်နှစ်ခါ စုပ်ဖူးနေပြီလဲ မသိဘူး..ဟွန်း” “မစုပ်ဖူးလို့ ..ဒါကြီး ဝယ်လာတာ.. စမ်းကြည့်ရအောင်.. ယုနွယ်” “ဘယ်လို စမ်းမှာလဲ…ဟုတ်မှလဲ လုပ်နော်… မမခိုင်” မမခိုင်က အခန်းဒေါင့်သို့သွားကာ ထမီလေးကို ချွတ်လိုက်၏။ ယုနွယ်..မျက်လုံးအဝိုင်း သားဖြင့် ကြည့်နေရှာသည်။ ဖြူဝင်းစိုပြေသော မမခိုင့် အောက်ပိုင်း အလှလေးများမှာ မိန်းကလေးချင်း အားကျလောက်သော အလှဖြစ်သည်။ ပြည့်တင်း ဖေါင်းကားနေသော တင်ပါးလေးနှစ်လုံးက ရေအိုးတင်၍ ရလောက်အောင် ကော့တင်းချိတ်နေသည်။
မေခိုင်က ယုနွယ်ထံသို့ တစ်ချက် စွေကြည့်ရင်း.. ရယ်သည်။ ပြားချပ်တင်းမာနေသော ဗိုက်သားလေး အောက်မှ သေးကျင်သော ခါးသွယ်လေးတွင် လီးအတုကြီး ခါးပတ်ဖြင့် သားရေ အပျော့စားကို ပတ်လိုက်သည်။ ခြောက် လက်မ ရှည်လျက် လေးလက်မခွဲခန့် အရွယ်တောင် လုံးပတ်ရှိသော လီးကြီးက မေခိုင်ဆီးခုံမှနေ၍ ရှေ့သို့ ထောင် ထွက်လာသည်။ ခါးပတ် အတွင်းပိုင်းမှ အလားတူ တန်ဆာမျိုး တစ်ခုက မေခိုင်၏ အဂ်ါစပ်အတွင်းသို့ နှစ်ဝင်သွား သည် “အင်း..အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..” ခါးပတ်ကို တင်းတင်း ပတ် လိုက်သည်နှင့် မေခိုင်စောက်ပတ်လေးအတွင်း ပြည့်ကြပ်နာကျင်သော ဝေဒနာကို ခံစား လိုက်ရသည်။ ယုနွယ်က မေခိုင်လုပ်နေပုံ ကို ကြည့်၍ သဘောပေါက်သွားသည်။ ခါးလေးလိမ်ရင်း ကြည့်နေရာမှ မှန်တင်ခုံ ထိုင်ခုံပေါ်မှထကာ အခန်းဒေါင့်သို့..မရဲတရဲ လျောက်သွားက မေခိုင့်ခါးပတ်ရှိ လီးကြီးကို အသေအချာ ကိုင်ကြည့်သည်။
“ထမီ ချွတ်လိုက်လေ .ယုနွယ်.. စမ်းကြည့်ရအောင်ပါဆို..” “အယ်..ကွဲပြဲကုန်ရင်…ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..” “အိုး..နင့်ဟာက..ဒါလေး တောင်.. မဝင်အောင် .. ကျဉ်းနေလို့လား..” “မသိဘူးလေ..တစ်ခါမှ..မလုပ်ဖူးတဲ့ဟာကို..” “ချွတ်ပါ…နာတော့လည်း..မလုပ်နဲ့ ပေါ့..” မေခိုင် အဆွယ်ကောင်း ၍ ယုနွယ် ..ထမီ ချွတ်လိုက်သည်..။ ပြစ်မျိုးမဲ့မထင် အလှမျိုးဆိုသည်ကို နောင်လတ်တို့ အဖွဲ့ စာဖွဲ့ ဖူးကြသည်။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး မှဲ့စွန်းလေးတောင် မရှိသော အလှမျိုးဖြစ်သည်။ ယခု မှန်ဘီလူးထဲ၌ ယုနွယ်၏ ဖြောင့်စင်း ကြီးမားသော ပေါင်တန်ကြီးများကြားမှ အဖုတ်မဲမဲကလေးကို ထင်းကနဲ တွေ့ရသည်။
ခုံးခုံး မို့မို့လေး ဖေါင်းကားနေသော ဆီးခုံဝင်းဝင်း လေးအောက်မှ အကွဲကြောင်း နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေးက ပေါင်ကြားမှ တိုးဝင် ပျောက် ကွယ်လျက်ရှိသည်။ မေခိုင်က ..ထမီလျောချလိုက်သည်နှင့် မတ်ထောင်ကာ ဝင်းလက်စွာပေါ် လာသော.. ယုနွယ်နိ့ကြီးနှစ်လုံးကို အသာအယာ ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး နိ့သီးခေါင်းလေးများကို ဖြေးညှင်းစွာ ပွတ် နယ်ပေးလိုက်၏။ “ဟာ..ဟာ…အ..ဟင့်..” ယုနွယ် ..မျက်တောင်လေးများ မှေးစင်းသွားကာ မေခိုင်လက်ကလေးများကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်မိသည်။ အကြော စိမ်းလေးများ ယှက်သန်းနေ သော ယုနွယ်ပါးပြင်လေး နှစ်ဖက်၌ တမဟုတ်ချင်း သွေးရောင်လေးများ လွမ်းသွား သည်။
မေခိုင်..အသက်ရူသံလေး ပြင်းလာသည်။ ယုနွယ် နိ့သီးခေါင်းလေး နီနီစွေးစွေးကို နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဖြင့် ငုံခဲ၍ လျာ ထိပ်ကလေးဖြင့် ကလိပေးလိုက်ရာ ယုနွယ်ခမျာ တီ ဆားနဲ့တို့သကဲ့သို့ ဖျတ်ဖျတ်လူးကာ တွန့်လိမ်သွား လေ တော့သည်။ “အင်…ဟင်း… ဟင်း..အ..ကျွတ်…တမျိုးကြီးပဲ.. ခိုင်ရယ်..” “ယုနွယ် ..ဟာထဲကို ဒါထည့်လေ… ပေါင်ကားထား..” “ဖြစ်…ဖြစ်ပါ့.မလား….ခိုင်…မ ဝင်ရင်..ဒုက္ခ..” “အရမ်းနာရင် မထည့်နဲ့ပေါ့. ..ယုနွယ်ရဲ့ … ကဲ…လာ..” မေခိုင်က သူမခါးမှ ရာဘာလီးတုကြီးကို ယုနွယ်စောက်ပတ် အဝ၌တေ့ပြီး… ခါးကိုဖက်ခါ…ဖိသွင်းလိုက်သည်။ “ဗြွတ်..အား…အာ…နာတယ်..ခိုင်…နာတယ်…” ခြောက်သွေ့သော ရာဘာလီး တုကြီးက ဖြူဖွေးနူးညံ့သော ယုနွယ် စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ အခြောက်တိုက်ကြီးဝင် သွားလေရာ နာကျင်သွားရရှာသည်..။ မေခိုင် က ဖိသွင်းခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး..ယုနွယ် ၏ လှပစိုပြေသော နှုတ်ခမ်း လေးကို စုပ်ယူလိုက်ပြန်သည်။ မေခိုင်က ရာဘာလီးအတုကြီး တစ်ဖက်က ဝင်ထားသည်မို့ အလွန်ခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေသလောက် ယုနွယ်မှာအစိမ်းသက်သက်လေးဖြစ်ရာ…ရုတ်တရက် ရှက်ခြင်း ကြောက်ခြင်းတို့ကသာ ကြီး စိုးနေသဖြင့် ခံစားမရနိင်အောင် ဖြစ်နေရလေသည်..။
“မရဘူး…မရဘူး…ခိုင်…ယုနွယ်.. အရမ်းနာတယ်..” ယုနွယ်က မေခိုင်ပုခုန်းကို တွန်းထုတ်ရင်းဖြင့် ပြောသည်။ သို့သော် မေခိုင်က မျက်နာလေးတပြင်လုံး နီရဲလာကာ အသားလေးများ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး အသက်ရှုပြင်းထန်လာနေ၏။ “အစမို့ပါ…နွယ် ရဲ့..အို..မတွန်းနဲ့လေ.. အင့်…အ” “ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…မလုပ်ချင်တော့ဘူး…နာတယ်.. နာတယ်..” ယုနွယ်က ဇွတ်ကန် ငြင်းသည်။ မေခိုင့်ပုခုန်းကို တွန်းထားနေရာမှ ခါးကိုစုံကိုင်ပြီး တွန်းပြန်သည်။ မေခိုင်ကလည်း အားနှင့် ပြန်ဆွဲသွင်းနေလေရာ လီး ကြီးမှာ ယုနွယ် စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တစ်ဝက်လိုးပေး နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေ ပေသည်.။ ဝင်သွားလိုက်..ထွက်လာလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှား ရင်း.. ယုနွယ် စောက်ခေါင်းလေးအတွင်းနှင့် ပွတ်တိုက်ဖန် များလာ လေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် စောက်ရေကြည်လေးများ ယိုစီး ကျလာ၏။ လီးအတုကြီးတွင်လည်း စိုစွတ် ပြောင်လက်လာလေတော့သည်။
ယုနွယ်.. ပေါင်သားလေးများမှာ မသိမသာ ပုစွန်ဆိတ်ခုန်လေး ခုန်လာသည်။ ရင် ထဲ၌လည်း တဒိန်းဒိန်း နှလုံးခုန်သံမြည်နေသည်။ ပထမတုန်းကတော့ အပျော်လိုလို အစမ်းသဘောလိုလို လုပ်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်သော်လည်း အဂ်ါစပ်ထဲသို့ ထိုပစ္စည်းကြီး နင့်နင့်နဲနဲ ဝင် ရောက်ပြီး တကယ်ခံစားနေရသောအခါ ဘယ်တုန်းကမှ မခံစားဖူးသေးသော အရသာ တစ်မျိုးကို ယုနွယ် ခံစားလာရသည်။။ မေ ခိုင်၏ ကျွမ်းကျင်ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ် ပွတ်သပ်ပေးမှုလေးများကလည်း.. တစ်ကိုယ် လုံးကြက်သီးလေးများ အဖုအဖု ထလာသည်။ တဇိုးဇိုး တဇတ်ဇတ် တုန်ရီလာပြီး.. နှုတ်ခမ်းလေး နှစ်မွှာမှာလည်း ပုစွန်ဆိတ် ခုန် ခုန်လာလေတော့သည်။ “အား… အင်း..ဟင်း..ဟင်း…အ…အား… အား…အ.” “ဘွတ်…စွပ်…ပြွတ်…ဘွတ်…စွပ်..ပြွတ်… ဘွတ်..စွပ်..” စောက်ရေများက တစိမ့်စိမ့် ကျလာသည်.. စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို စိုစွတ်ဝင်းလက် လာစေသည်။ အစ ပထမ ကဲ့သို့ ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ် နာနာကျင်ကျင် မဟုတ်တော့ပဲ.. တကယ့်ပကတိ ယောက်ျားကြီးတစ် ယောက်၏ လီးကြီးကဲ့သို့ အရသာရှိလွန်းလှပြီး ပြေပြစ် ချောမွေ့စွာ လိုးပေးနေသော.. မေခိုင်ကိုယ်တိုင်မှာလည်း မျက်စေ့ နှစ်လုံးမှိတ်ခါ နှုတ်ခမ်းလေးများကို လျှာဖြင့်ယက်ခါ.. ယက်ခါ.. မှိန်းရင်း ကာမအရသာ ခံစားနေ၏။
“ဘွတ်..စွပ်” ဟူသော အသံနှင့် ဒစ်အဖုကြီး ကျွံဝင်သွားပြီး စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ စူးနှစ်ဝင်ရောက်သွားတိုင်း စောက်စိလေး မှာ တင်းမာသွားတတ်ပြီး အတင်းဖိကပ် ပြန်လည်၍ ခါးလေး ကော့ကော့ပေးမိလာသည်။ အိတွဲခြင်း မရှိ..အပျိုစင် နိ့ကလေးအစုံက မာသထက် မာကာ တင်းသထက် တင်းကျစ်မာတောင်နေပြီး မေခိုင့်နိ့သီးခေါင်းလေး များနှင့် ယုနွယ် နိ့သီးခေါင်းလေးများ အကြိမ်ကြိမ်ပွတ် တိုက်..မိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ခါ အင်နှင့်အားနှင့် ဆောင့်သွင်း ခြင်း ခံလိုက်ရသော အခါများတွင် ဆီးအိမ်တစ်ခု လုံး ကျင်တက်သွားကာ စောက်ခေါင်း အတွင်းမှ ဆောက်တည်ရာမရ ..မရိုး..မရွကြီး ဖြစ်ဖြစ် သွားတတ်သေး၏။ ထိုအခါမျိုးတွင် ယုနွယ်က မေခိုင့် ကျောပြင်လေးကို တင်းတင်းလေး ဆွဲဖက်ခါ တင်ပါးကြီးများ တုန်ခါသွားသည် အထိ..အားကျမခံ ပြန်လည် ဆောင့်ပြစ်လိုက်မိတတ်၏။ “အီး…အား….ယုနွယ်…တတ…အား.. ငါ..ပြီးတော့မယ်” မေခိုင်က ချွေးကလေးများ စို့လာပြီး တအီး အီး ငြီးတွားကာ အဆက်မပြတ်ကြီး ဆောင့်လိုက်လေတော့သည်…။ “ဘွတ်…စွပ်…စွတ်…ဘွတ်…ပြီးပြီ…ပြီး…ပြွတ်..” “အင့်… အင့်…အင့်…အ .. အီး…မေ…မေခိုင်… အ…အ…အား…” ဖြူစင် ဝင်းပနေသော ခန္ခာကိုယ်လေး နှစ်ခုမှာ အထိန်းအကွပ်မရှိ လှုပ် ရမ်းနေကြပြီး.. မြွေနှစ်ကောင်ကဲ့သို့ တွန့် လိမ်ကောက်ကွေးသွား ကြလေသည်။ လှပဖြောင့်စင်းသော မေခိုင့်၏ ပေါင်တံလုံးကြီး များက ယုနွယ်ခန္ခာကိုယ် လေးကို ပြဲကားကားကြီးခွလျက် အထက်အောက်ပွတ်သပ်ရင်း တုန်ခါသွားရှာသည်..။
ယုနွယ် မှာလည်း ငလျင် ပြိုကျသကဲ့သို့ ရှေ့နောက် ယိမ်းခါသွားရှာလေသည်။။ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ သိမ့်သိမ့်ခါသွားကြပြီး နှစ် ယောက်သား ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်လျက် သုတ်ရေများကို လွတ်ထုတ်လိုက်ကြလေတော့သည်။ “အား….အား….အား…… အာ…” နှစ်ယောက်စလုံး ပျော့ခွေသွားကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ ပုံလျက်သားလေးများ ကျရောက်သွားကြလေသည်။ မေခိုင်နှင့် ယု နွယ် လီးခါးပတ်ကြီးနှင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အားရအောင် လိုးနေကြပုံကို နောင်လတ်နှင့် ထိန်ဝင်းက အားကောင်းလှ သော မှန်ဘီးလူးကြီးဖြင့် အစအဆုံးကြည့်ကာ လူသားစစ်စစ် လီးကြီးများက ပုဆိုးများ ထဲမှ သွားရေ တမြားမြားနှင့် ပုဆိုးများ စိုစွတ်ခါ အကွက်ကြီးများဖြစ်ကုန်သည်အထိ တောင်နေမိကြလေသည်။။ “ယုနွယ်ရေ…ဟေ့…မေခိုင်…အိုး…ဘယ်လိုဖြစ်နေကြ တာလဲ… ဟင်” အခန်းအတွင်းသို့ ဝေါလ်ပိုစတာကြီး တစ်လိပ်ကို ကိုင်းရင်းဝင်လာသော ယဉ်ထွေးမှာ ခြေလှမ်းများ တုန့်ကနဲဖြစ် သွားရလေသည်။ ယုနွယ်က ရှက်စနိးအပြုံးလေးဖြင့် ပြုံးရင်း သူမစောက်ပတ်ကြီးထဲမှ သုတ်ရေများနှင့် လိမ်းကြံ ပေရေနေသော လီးကြီးကို ဖင်လေးနောက်ဆုတ်ပြီး ပြွတ်ကနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီး ထလိုက်ခါ ရေချိုးခန်းလေးထဲ ပြေး ဝင်သွားလေတော့သည်…။
မေခိုင်က ခါးပတ်ခေါင်းကို ဖြုတ်နေ၏။ ပြီးမှ.. သူမစောက်ဖုတ်ကြီးထဲ၌ အဆုံးထိ ဖိကပ် ဝင်ရောက်နေသော လိင်တံအတုကြီးကို လက်ဖြင့် ကိုင်လှည့်ကာ ပြွတ် ကနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ သုတ်ရေအဖတ် အဖတ်များက လီးဒစ်ကြီးတွင် စုပြုံပြီး ကပ်ပါလာကြလေ သည်…။ “ဟင်း…ဈေးဦးဖေါက်ပြီးကြပြီပေါ့လေ….. ဘယ့်နှယ့်လဲ..” “အဟင်း…ထွေး…စမ်းကြည့်ပေါ့…ဟင်း…ဟင်း” မယဉ် ထွေးက ရာဘာလီးကြီးကို မရဲတရဲလေး ကိုင်ကြည့်ကာ အသံတုန်တုန်ကလေးနှင့် ရယ်ရင်း ပြောသည်။ “အတော်ကြီးတာပဲနော်… ယောက်ျားလီး အတိုင်းပဲ ဟယ်…” “အားလုံးတော့ မတူဘူးပေါ့…ထွေးရဲ့ .. သူ့မှာက .. လူလို အပူရှိန် မရှိတော့…အေးစက်စက်ကြီး ခံလို့ အရသာ သိပ် မရှိလှဘူး..” “အံမယ်…သူအလိုးခံဖူးတာ ကျလို့..ဟွန်း..” မေခိုင်က …ရေချိုးခန်းထဲသို့ လီးခါးပါတ်ကို ဆေး ကျောသုတ်တင်ရန် ယူဆောင်သွားလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ယုနွယ် တစ်ယောက် ရေစက် ရေပေါက်ကလေးများ စိုစွတ်ခိုတွယ်နေ သော ယုနွယ် မျက်နာလေးက ပကတိ က လေး မျက်နာလေးအလား မရွံ့မရအပြုံးလေးနှင့် လှပလွန်းနေသည်။။ ဒူးဆစ်အထိ ဖုံးဖိ နေသော ယုနွယ်ခန္ခာ ကိုယ်လေး အောက်ပိုင်းမှ ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းလေးများက ကြွေရုပ်ကလေး နှယ် တောက်ပဝင်းလက် နေသည်။ အထွေးက ယုနွယ် နဖူး နုနုလေးကို ညှင်သာစွာနမ်းလိုက်သည်။
“ဒီမှာ…ပုံတစ်ပုံဝယ်လာတယ်..တွေ့လား..” လက်ထဲမှ ပိုစတာကြီးမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား စတားလုံး ( ရမ်ဘို ) ၏ ကြွက်သား အဖုအထစ်များ ပြေပြစ်စွာ ဖေါ်ပြ ထားသော တည့်တည့်ရပ်နေသည့် ကိုယ်လုံးအလှပေါ် ပုံကြီးဖြစ်သည်။ “ဟယ်…လှလိုက် တာ..အဲဒါ…မမထွေး ဘယ်ကရလဲ..” “ဖလော်ရီဒါက ပြန်လာတဲ့ မမထွေး သူငယ်ချင်းမ စိုးသန္တာ. .ဆီကလေ…ဒီမှာက..ဒီပုံမျိုး လုံး ဝ မရှိဘူး..” မှန်ပါသည်..ဆိုဒ်ကြီး ကိုယ်လုံးပေါ် ပုံများမှာ ယခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ နိင်ငံခြား ရုပ်ရှင်အေဂျင်စီများက ဈေးတွက် တွက် ပြီး သီးသန့်ရောင်းချလာခြင်းဖြစ်ရာ… မြန်မာပြည်အတွင်း၌ ယခင်ရှိပြီး ပုံများဖြစ်သော သုံးချိုးနှစ်ချိုးပုံများ သာ ရှိပြီး ယခုကဲ့သို့ ခြေဖြားအထိ ခြောက်ပေဆိုဒ်ကြီးမျိုး လုံးဝ ဝင်လာခြင်းမရှိသေးပေ..။ “ဒီ မတ်တပ် ဗီဒိုကြီးမှာ ဟောသလိုတင်..” ထွေးက ကြိုး သိုင်း ပိုက်ဆံအိတ်ကလေးကို စားပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီး ပိုစတာကြီးကို ဘီဒိုကြီး၌ ကပ်ပြသည်..။ခါးဝတ် ဘောင်းဘီတို အနက် ကလေးသာ ပါသော စတားလုံးပုံပ မိန်းမပျိုများ စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ.. ကြွက်သားအဖုအ ထစ်ကြီးများ အမြောင်းလိုက်…ကြွရွ ဖေါ်င်းကြွနေပြီး.. ညို့အားကောင်းသော မျက်လုံးများကလည်း.. ပကတိ လူ့ မျက်လုံး အနေအထား အတိုင်း ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်အဝ ရှိနေပြန်ရာ ယုနွယ် ရင်ခုန်သွားမိသည်။
“ဟွန်း…ရုပ်ကြီးကလဲ အသက်ဝင်လိုက်တာ…မမထွေးရယ်.. မျက်လုံးကြီးတွေက ရင်ကို ခုန်သွားတာပဲ..” ယဉ်ထွေးက ကျေနပ် စွာပြုံးသည်..ကော်ဗူးအဝါလေးကို ယူလိုက်ပြီး..ဘီဒိုကြီး၌ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကပ်နေသည်။ ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာသော မေ ခိုင်က ပိုစတာပုံကြီးကို တအံ့အအောကြည့်ကာ .. ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ ခုန်လိုက်ရင်း “ဟုတ်ပြီ…မေ ထွေး..ဒီနားမှာ အပေါက်ဖေါက်ပြီး ဒါကြီး တပ်ထားလိုက်ရင်..အို..ကေ..” “ဟယ်…အသဲယားစရာကြီးဖြစ်သွားပြီ…ဟီး..ဟီးး” ထွေ က ဦးဆောင်ပြီး ဘီဒိုတံခါးကို ရန်ဘို လီးနေရာ၌ အပေါက်ငယ်လေး ဖေါက်ကာ ရာဘာလီးကို အတွင်းမှ အ သေ စွပ်ပြီး တပ်လိုက် ကြလေသည်..။ “တောက်…မချင့်မရဲ ..ဖြစ်လိုက်တာကွာ..ဟင်းဟင်း…” ထိန်ဝင်းက မှန်ဘီလူးကို သန်းရှိန်အား ပေးလိုက်ပြီး ပြော၏။ သန်းရှိန်က လည်ချောင်းမှ ဇလုပ်ကြီး တက်လိုက် ကျ လိုက်ဖြစ်ခါ… တံတွေးမြိုချရင်း ကြည့်နေလေသည်။
“ဒီဟာမလေးတွေ…တော်.တော်..ယားနေကြဘီကွ..” “အေး..သူတို့က ယားနေတယ်..ဒို့ကလဲ တောင်နေပြီ..” ထိန်ဝင်းက လီးကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဆုပ်ကိုင်ရင်း ရမ္မက် မျက်နာနှင့် ပြောလိုက်ရာ သန်းရှိန်က အဟားဟား ရယ်ရင်း ပြောလိုက်သည်။ “ဟား..ဟား..ကြက်တက်ရယ်.. မင်းဟာလေးက ကြက်တက်လေးလောက်ရှိတာ..မင့်ဆော်က မင်းကို တစ်ညပဲ ပေါင်းပြီး ကွာပြစ် မှာ သေချာတယ် .. ဟား…ဟာ..” “ဟ …ခွေးမသား…လီးကွ..လီး…မှတ်ထား.. မသေမချင်း တစ်ညလုံးလိုးမဲ့လီး…ဇီးမကပ်ရင် .. လီးဖြတ်ပြစ်မယ် ကွ သိလား” ထိန်ဝင်းက ပုကွကွ သူ့ခန္တာနှင့် လိုက်အောင် ကြွားလုံးထုတ်လိုက်သောကြောင့် နောင်လတ်နှင့် သန်း ရှိန်မှ အူနှိပ် ၍ ရယ်ကြဟန်ကို တမင်ပြုလုပ်ဖြစ်လိုက်ကြသည်..။ “အေး…ရယ်ကြ…ရယ်ကြ…နောက်မှ.. ကိုထိန်ဝင်းရယ်.. ခင်ဗျား ဟာကြီး ခဏလောက် ငှားပါဗျာ.. လို့ လာမပြောနဲ့ ဟင်း” ထိန်ဝင်း မျက်နာက အတည်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်..။ ယောကျားဖြစ်ပါ လျက် ကြက်တက် ဟု အခေါ်ခံရသည်ကို ထိန်ဝင်းသာ မဟုတ် ဘယ်ယောကျားကမှ အပြောမခံချင်တတ်ကြပေ…။ နောင်လတ်က ခန္ဒာကိုယ်ထွားကြိုင်းပြီး ဖြူဝင်းစိုပြေသော အသားအရေကြောင့် မိန်းကလေးများ ခိုက် လောက်အောင် ချောမောသူဖြစ်သည်။
မိန်းကလေး ဆိုသည်မာလည်း ရုပ်ချော …ခိုက်.. ပစ္စည်းဥစ္စာ ကြွယ်ဝလျင်လည်း…ခိုက်…လိင်အဂါကြီးမားလွန်း၍ ထင်ရှားသူဆို လျင်လည်း မခိုက်သည့်တိုင်အောင် စိတ်ဝင်တစား ရှိတတ်ကြသည်။ ယခုလည်း နောင်လတ် ထိန်ဝင်းနှင့် သန်းရှိန်တို့နှင့် ဂျစ်ကန်ကန် အဖြစ်မျိုး တိုးခဲ့ကြသည့်နောက် အုပ်စုချင်းက မသိမသာ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖုံးကွယ် ရန်စောင် ဟန်သာပြနေကြသည်။။
“ဒါ…ကျမ ယူထားတဲ့ ..စာအုပ်ရှင့်..” “ဟလား…ဒါဆိုအတော်ပဲ…အတူဖတ်ကြတာပေါ့..” နောင်လတ်နှင့် မေခိုင်က စာအုပ်ဆိုင်၌ ဤနယ်စဆုံဖြစ်ကြသည်။ “စကားပြောတာ…ကြည့်ပြောနော်… ဟင်း…ပါးကွဲသွားမယ်..” “ကိစ္စမရှိပါဘူး…မေခိုင်…ကိုနောင့်အသဲ ကို မခွဲရင် ပြီးတာပဲ…တကယ်တော့.. အချစ်ဆိုတာ.. တစ်ယောက်တစ်လှည့် ကွဲကြရတာပါ..” “ဘာ…ဘာပြောတယ်…” မေခိုင့် မျက်နာလေး ရဲရဲနီကာ နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး အော်၏။ စာအုပ်ဆိုင်ဒေါင့် အတွင်းဘက်၌ မေခိုင်နှင့် နောင် လတ်တို့ပွဲကို မည်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်ကမှ သတိမထားမိကြချေ..။ “ဟုတ်တယ်..မေခိုင်ရဲ့..စဉ်းစားကြည့်လေ.. ပါးကွဲမယ်..ဘာညာဆိုပြီး ကျိမ်းဝါးကြ ပေမယ့်.. ညားသွားကြရင်..တကယ် သွေးထွက်အောင် ကွဲနေကြရတာ.. မိန်းကလေးတွေပဲ မဟုတ်လား” “ဟင်…ရှင်…ရှင်…” “စိတ်မဆိုးနဲ့ မေခိုင်..ကိုနောင်နဲ့ဆိုရင်..မေခိုင့် ဟာလေးကွဲပြဲသွားမှာတော့ သေချာတယ်.. သတ္တိရှိမှ ချစ်ပါ..” “အို…ရှင်…ဘယ်လို လူလဲ…ဟင်..” “ကိုနောင် မေခိုင့်ကို အရမ်း လုပ်ချင်နေမိတယ်.. မေခိုင်ရယ်.. အိပ်ယာဝင်တိုင်း ကိုနောင့်ဟာကြီးက အမြဲတောင် နေပြီး..မေခိုင့်ဟာလေးကို..လိုးရရင် ဘယ်လောက်တောင် ကောင်းမလဲလို့..အမြဲ စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့ ရတာပါ..မေ ခိုင်ရယ်..တကယ် ပါ..”
မေခိုင် အသက်ရှုတွေ ရပ်သွားမလား.. ထင်ရသည်..။ နောင်လတ် ဤမျှ ရိုင်းစိုင်းလိမ့်မည်ဟု .. မေခိုင်ထင်မထား ..ရိုင်းပြလွန်းသော နောင်လတ် စကားများက မေခိုင့် ပါးစပ်ကို အဟောင်းသားလေးဖြစ်စေသည်။ “မေခိုင်…ကိုနောင့်ကို ချစ်ပါနော်..နော်.. မေ ခိုင်အတွက် ကိုနောင်…ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ကောင်းကောင်းလေး လိုးပေးနိင် ပါတယ်..” နောင်လတ်ကိုယ်မှ အရက်နံ့သင်းသင်းလေးကို မေခိုင် ရှုရှိုက်မိ၏။ နောင်လတ် အရက်မှုးမှုးနှင့် ထင်ရာတွေ စွတ် ပြောနေခြင်းပါ..ထို့ကြောင့် စကားဖက်ပြိုင်နေလျင် မိမိ မိန် ကလေးဖက်ကသာ အနာချည်းမို့..ဆတ်ကနဲ လှည့် ထွက်လိုက်သည်။ နောင်လတ်ကလည်း ပြတ်ပါဘိ ..ပုခုန်းလေးနှစ်ဖက်ကို လှစ် ကနဲ လှမ်းဖက်ကာ မျက်နာချင်း ဆိုင် ဆွဲလှည့်လိုက်ရာ ခေါင်းလေးက မော့သွားပြီး နီစွေးသော နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက နောင်လတ်၏ ကြီး မားထူအမ်း သော နှုတ်ခမ်းကြီး၏ ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီးစုပ်ယူချင်းကို ခံလိုက်ရ၏။
လက်ထဲမှ ဝထ္တုစာအုပ်က လွတ်ကျသွား ၏။ ပူနွေးမာတောင်သော ကြီးမားကျစ်လစ်သည့် နောင်လတ်လီးကြီးက..မေခိုင့် ပေါင် ကြားထဲသို့ ထမီနှင့် ပုဆိုး ကို တွန်းထိုးပြီး ဝင်ရောက်လာသည်။ မေခိုင် ဆတ်ကနဲ နှလုံးလေရိုက်၏..သတိလက်လွတ် ပေါင်လေး နှစ်ဖက်ကို ခပ်ကွကွလေး လုပ်ပေးလိုက်မိလေရာ..နောင်လတ်က..အင့်ကနဲ နေအောင် ဆွဲညှောင့်လိုက် ၏။ “အို..ဖယ်…လွတ်..” မေခိုင် ရုတ်တရက် အရှက်အကြောက်ကြီးလာ .. အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်လာကာ…နောင်လတ်ရင်ဘတ်ကို ဆောင့် တွန်းပြီး ထွက်ပြေးသွား၏။ နောင်လတ်မှာ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက်ဖြစ်နေသော ရင်ဘတ်ကြီးကို ပင့်သက်ချကာ မေ ခိုင့်တင်ပါးကြီးများကို လှမ်းကြည့်နေမိသည်။ စာအုပ်အငှားသမားလေးကလဲ အခုမှ ဆိုင်အနောက်ဖက်ခန်းကို လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ပုဆိုးအတွင်းမှ တိုး ထွက် ထောင်ထနေသော နောင်လတ်လီးကြီးကို တန်းတန်းမတ်မတ် ကြီး တွေ့သွားလေတော့သည်။ “ဟား..ဟား….ကျွန်တော့ကို မ ချိန်ထားပါနဲ့ဗျာ… ကြောက်တတ်လို့ပါ..” သည်ည..နောင်လတ် အိပ်မပျော်တော့.. ညဦးပိုင်း စာအုပ်ဆိုင်၌ ဖြစ်ခဲ့ပြောခဲ့သည်များကို တွေးကာ လုံးဝ အိပ်မ ပျော်…။ ထို့ကြောင့်လည်း..သန်းရှိန်နှင့် ထိန်ဝင်းတို့ အိပ်ပျော်သွားကျသည်နှင့် ..မေခိုင်တို့ အဆာင်ဖက်သို့ ကူး ဝင်ခဲ့သည်။။ လောကကြီးသည်…ဆန်းကျယ်လွန်း၏။ တစ်ခါတစ်ရံ ခုတ်ရာတခြား ရှရာတစ်ခြားဖြစ်တတ်၏။
နောင်လတ် မေခိုင်အိပ်သော အခန်းထဲသို့ ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်မှာပင် ရမ်ဘိုပုံကြီးရှိရာသို့ ခြေဖေါ့နှင့်ကာ ဝင် လာသော ထွေးကို နောင်လတ် ရှောင်ရန်အတွက် မတ်တပ် ဘီဒိုကြီးဒထဲသို့ဝင်လိုက် ရလေသည်..။ အထဲတွင် နေ့လည်ဘက်က တပ်ဆင်ထားသော ရာဘာလီး အတုကြီးမှာ နောင်လတ်ဗိုက်နှင့်ထောက်ခါ ရုတ်တရက် ဘီဒို တ ခါး ပိတ်မရဖြစ်သွားသည်။ နောင်လတ်…ကွိုင်ပူပြီ…ကြံရာမရဖြစ် နေရာမှ ရာဘာလီးကြီးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြီး… သူ့ လီးကြီး ငိုက်ပျော့ပျော့ကြီးကို ဘီဒိုအပေါက်မှ ထိုးထုတ်ခါ ငြိမ်နေလိုက်ရလေ သည်။။ ထွေးကလည်း ရမ်ဘိုပုံ ကြီး ၌ တပ်ဆင်ထားသော ရာဘာလီးအရသာကို ခံစားရန်အတွက်.. တိတ်တဆိတ် လာခဲ့ခြင်းဖြစ် ရာ.. မှုံဝါးသော မီး ရောင်အပြာရောင် ကလေးနှင့် ဝိုးတဝါးဖြစ်နေသော ဘီဒို ပေါက်မှ နောင်လတ် လီးကြီးကို နူးညံ့သော လက်ချောင်း လေးများဖြင့် အသာအယာ ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်လိုက်လေရာ.. နောင်လတ်လီးကြီးမှာ သိသိသာသာကြီး မာတောင် ပြီး တောင်ထလာလေသည်..။
ထွေးမှာ ရာဘာလီးကြီးကို တစ်ကြိမ်မှ သုံးဘူးသူမဟုတ်လေရာ ..ဘီဒိုအတွင်းမှလီး မှ ရာဘာလီးဟုသာ ထင်နေလေသည်..။ နောင်လတ်အတွက် အကျဉ်းအကျပ်ထဲရောက် နေသည်။ နောင်လတ် ချစ်သော မေခိုင့်ဆီ သို့လာမိရာမှ မထင်မှတ်ပဲ ထွေးနှင့်.. ရင်ဆိုင် တိုးနေမိခြင်းအတွက် ချွေးသီးချွေးပေါက်များ ကျ လာနေရသည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်၏ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကိုင်တွယ်ခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားရသဖြင့် အရသာရှိသလို ရှက်သလိုလိုကြိးလည်း ဖြစ်နေမိသေး သည်။ လီးထိပ် ဒစ်အဝနားတဝိုက်.. လက်ညှိုးထိပ်ကလေးဖြင့် ပွတ်သပ်ခြင်း ခံလိုက်ရတိုင်း.. ဖင်စအိုဝ ရှုံ့သွားအောင် နောင်လတ် ခံစားလိုက်ရလေသည်။။ စိမ့်ကျင် သော ဝေဒနာ တစ်မျိုးကို လည်း ခံစားလိုက်ရသည်။.
“အင်း..ဟင်း…အင်း…အ…အား..” ထွေး နုတ်ခမ်းမှ ညီးသံသဲ့သဲ့ကို နောင်လတ် ကြားနေရသည်။ နောင်လတ်လီးကြီးကို လက်ဖျား လေးများနှင့် ကိုင် တွယ် ပွတ်သပ်နေရာမှာ.. လက်ဆုပ်ကလေးထဲ ထည့်ကာ ..ညင်သာစွာ ဂွင်းတိုက်ပေးနေသလို ပြုနေပြန်သဖြင့် နောင်လတ် လီးကြီးမှာ အကြောကြီးများ ထောင်ထလာအောင်.. မာတင်း လာသည်။ ထွေးခမျာ..ဘယ်သူမှမသိ ဟူသော အသိစိတ် ဖြင့် နောင်လတ်လီးကြီးကို ရာဘာလီးအတုဟုသာ ထင်ပြီး .. စိတ်ရှိတိုင်း ပွတ်သပ် ကိုင် တွယ် နေ ခြင်းဖြစ်၏.။ ဘီဒိုကြီးအတွင်းမှ နောင်လတ်မှာ အသားများ တဆတ်ဆတ်တုန်လာပြီး..လီးထိပ်မှ ချွဲကျိသော အရည်ကြည်များ ယိုစိမ့်လာသည် အထိ ခံစားလိုက်ရ သည်ကိုမူ..ထွေး မသိချေ..။ ထွေးက ထမီလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ချွတ်ချ လိုက် လေသည်။ တင်ပါးအောက်ဖက်မှ တစ်ထွက်နေ သော ဖင်နှင့် ပေါင်ဆက်နေရာမှာ ကြွမောက်ပြီး ခုံး ထနေ သည်။ ထွေး၏ ဖင်အနေအထားမှာ ဖင်ကုန်းပြီး လိုးချင်စရာကောင်းသော ဖင်ကောက် အမျိုးအစားလေးပင် ဖြစ် သည်။ ခက်သည်က ဘီဒိုအတွင်းမှ နောင်လတ် ခမျာ ထွေး၏ လှပလွန်းသော အဆီနှင့် တဝင်းဝင်း ကိုယ်ခန္ခာ လေး ကို မမြင်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထွေးက အသားဖြူသည်… စောက်ပတ် တဝိုက်က အခြားနေရာများထက် ပို၍ဖြူဆွတ်နေသည်။. နူးအိသော အ သားဥလေးက လီးထိပ်ကို တေ့လာသောအခါ နောင်လတ် ဘီဒိုတံခါးကို အတင်းဖိကပ်ခါ…လီးကို ထွက်နိင်သမျ ထွက်အောင် တွန်းပေးလိုက် မိသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိရှာသော ထွေးမှာ လီးကြီး တောင်လာပုံ..ပို၍တင်းမာပြီး.. တဒိတ်ဒိတ် သွေးခုံနေပုံများကို သတိ မထားမိ ရှာပဲ.. ရာဘာလီးအတုဟုသာထင်လျက် စောက်ပတ်လေး နှစ်ဖက်ကို အသာဖြဲပြီး..လီးကြီးနှင့် တေ့ကာ .. ဖိချ..လိုက်ရှာသည်…။
“ဗြစ်…အီး….အ…အ..” လီးကြီးထိပ်က ..အတန်ငယ် ယောင်ကိုင်းနေသလို ကြီးထွား၏။ စောက်ပတ် အသစ်စက်စက်လေးမို့.. စောက်ပတ် နုတ်ခမ်းသား နှစ်ခြမ်းကို စုယူ ပြွတ်သိပ်တာ ထိုးဝင်သွားချိန်၌ နှုတ်ခမ်းသား ထူထူနှစ်ဖတ်ကြား၌ လီးကြီးထိပ် တစ် နေ သေးသည်။ အတန်ကြာ တင်းခံနေပြီးမှ.. ဗြစ်ကနဲ ကျွံဝင်သွားသည်။ ပူနွေးမာကောင်းသော အသားချောင်း ကြီး က စောက်ပတ် လေးထဲသို့ ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းကြီး တိုးဝင်သွားစဉ် ထွေးစောက်ပတ်လေးမှာ .. ချိုင့်ဝင်သွား ပြီး ..ခဏအကြာမှာ.. ပုံမှန်ပြန် တက်လာကြ ပြီး..လီးကြီးကို စုပ်ယူထားသလို..ညစ်မိနေသည်။ စောက်စိမာမာလေး က ဘီဒိုအပေါက် နှုတ်ခမ်းနှင့် ဖိကပ်ပွတ်သပ် မိသည် အထိ ထွေးက ဖိကပ်ထားကာ နာကျင်ခြင်း ထူးခြားစွာ အီစိမ့် ခြင်း ဝေဒနာ အရသာများကို စုပြုံခံစားရရင်း.. မျက်လုံး ကလေးမှေးကာ ..ဘီဒိုကြီးတွင် တပ်ထားသော ရမ်ဘို ရင် အုပ်ကြီးနှးစ်ဖက်ကို လက်ဝါးလေးနှင့် ပွတ်သပ်ခါ ဖြေးဖြေးခြင်း… စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးရောက်သည်အထိ ဖိချ နေ သည်။
ဘီဒိုအတွင်းမှ နောင်လတ်မှာ ဖေါ်မပြတတ်လောက်အောင် ဖင်စအိုနှင့် လီးအရင်း၌ ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်နေသော ကာ မအရသာကို အံ ကြိပ်ရင်း အသံမထွက်မိစေရန် သတိထားနေရသည်။ ဘီဒိုတံခါးကြီး ဆွဲဖွင့်ပြီး.. ထွေး အား အား ရပါးရကြီး ဖက်ခါ.. ဆွဲလိုးချင်စိတ် များမှာ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။ ထွေးက စောက်ခေါင်းအတွင်း.. ဖြစ် ဖြစ်ညစ်စွာ တဆတ်ဆတ် တုန်နေသော လီးကြီး ကို အသာအယာလေး ဖြေးညင်းစွာ…ဆွဲချွတ်လိုက်ပြန်သည်။ “ပြွတ်..ပလွတ်..ဗွီ..ပီ..” လီးကြီးက အကုန်ကျွတ်သွား၏.. စောက် ပတ်လေးနှစ်ခြမ်းက ရှုံ့သွားပြီး နုတ်ခမ်းနှစ်စ တင်းတင်းစေ့သွားမိခါ..အတွင်းမှ.. အရေကြည်လေးများ ပီကနဲ ပီကနဲ ညစ်ကျ လာ၏။ လီးကြီးမှာ..အလွန်တရာပင် မာတောင်နေသည်ကို တွေ့နေရသည်။ ထွေး..လေ့လာခြင်း စဉ်းစားခြင်းများ မလုပ်နိင်။ စောက်ပတ်လေးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပြန်ဖြဲကာ လီးထိပ်ကြီးနှင့် တေ့ထားလိုက်မိပြန်သည်။ အဆက်တည်း..လဲ ဖင်သားကြီးများ.. ကျုံ့.. ကျုံ့သွားအောင် အားစိုက်ဖိချလိုက်လေ သည်.။
“ဗြွတ်…ဘွတ်…ဘွတ်..အီး…အ…အား.. ကျွတ် ကျွတ်..” သည်တစ်ချီ မိမိဖာသာ အဆောင့်ကြမ်းမိသွားသဖြင့် စာက်ခေါင်းနံရံ တစ်ဖက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဖိထောက်မိ သွားပြီး..ပေါင်ရင်း တစ်ဖက်ကျင်တက်သွားသည်အထိ နာသွားလေရာ..ထွေး…ရှုံ့တွပြီး မျက်ရည်လေး ..ဝိုင်း သွား၏။ ကြွက်သား အဖုအထစ်ကြီးများဖြင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ထွားကြိုင်းသန်မာလှသော ရမ်ဘိုပုံကြီးနှင့် နုထွေး သော ပါးပြင်လေးကို အပ်ခါ.. တအင်း..အင်း..ဝေဒနာလေးခံစားရင်း.. တွန့်လိမ်နေသော ထွေး၏ လှုပ်ရှားမှုမှာ..မြင် ရသူ တစ်စုံတစ်ယောက်သာ ရှိပါက အလွန်အမင်း ချစ်စရာ အမူအယာလေး ဖြစ်လို့နေပေလိမ့်မည်။ လက်ဝါးလေးနှစ်ဖက်က ဘီဒိုကြီး တံခါးတွင် ကပ်ထားသော ရမ်ဘိုပုံ ပိုစတာကြီးကို ဟိုမှ သည်မှ ရွေ့လျား ပွတ် သပ်နေပြီး..တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသော ကိုခန္တာ လေးက ဝဲမှယာ..ယာမှ အထက်..အထက်မှ အောက်..ပုံစံအမျိုး မျိုးပြောင်းကာ.. ဖင်လေးတွေ…ဝိုက်တွန့်ဆော့ကစားသွားပုံမှာ အနုပညာ မြောက်လှသော ခံစားမှုပုံဖေါ်သည့် လှုပ်ရှားမှုလေး ဖြစ်နေပေရာ.. ကာမအရသာ၏ ကြီးမားသော စွမ်းအင်ကြီး အုပ်စိုး လွှမ်းခြုံနေပုံမှာ သိသာထင်ရှား လှသည်။ ပျိုမြစ်သော ထွေး၏ အတွေ့အကြုံ နုနုလေးကြောင့်လည်း လီးအစစ်ကို အတုဟုထင် ကာ မှုံရီဝိုးတဝါးမီး ရောင်အောက်၌ လှုပ်ရှား ပြုမူနေမိသော မိမိအဖြစ်ကိုလည်း ယခုတိုင် ထွေး…မသိရှာပါလေ။ တအင့်အင့်… တအိအိ ငြီးညူသံလေးက တိတ်ဆိတ်သော ညယံကို ထွင်းဖေါက်၍ တိုးတိုးညှင်းညှင်းလေး ပျံ့လွင့် နေပေရာ.. အပြင်မှ..တစ်စုံ တစ်ယောက်ကသာ ကြားမိပါက ဖိုမ.စုံတွဲ ..အပေးအယူမျှစွာ ဖြုတ်နေကြသည်ဟု သာ ထင်ကြပေမည်။
“အင်း..ဘွတ်…အင်း…အင်း…ပြွတ်…ဘွတ်… အင်း…အ…” ဖြေးဖြေးချင်း….လေးလေးမှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေသော လီးကြီး အဝင်အထွက်အသံ…ထွေး၏ ညီးညူသံလေးများမှာ မထင်ရှားသော အရောင်မှုံဝါးဝါး၌ စိတ်ကယောက်ခြောက်ခြား ဖြစ်ချင်စရာ ..ထွက်ပေါ်နေတော့သည်။ နောင်လတ် ကျင်ချောင်းထဲမှ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ခံစားလာရသည်.. လီးထိပ်က စောက်ခေါင်းအတွင်းပိုင်း သားအိမ်အဝကို ဒုတ် ကနဲ..ထိုးမိသွားတိုင်း.. နောင်လတ်မှာလည်း.. အီစိမ့်သွားအောင် ခံစားနေရလေသည်…။ “ဟွန်း..အခုမှ ၂ နာရီ ရှိသေးတယ်…ကိုယ်ပြန်အိပ်လိုက်အုံးမယ်ကွာ…မေခိုင်” “ကိုယ်တော့ …အိပ်လို့မရတော့ဘူး..ဟိုဟာကြီးကို မြင်နေရတာ.. စိတ် လှုပ်ရှားလိုက်တာ” မေခိုင်က မျက်နာလေးကို တစ်ချက်ပွတ်ပြီး ပြောလိုက်သည်။ ယုနွယ်က ဘီဒိုအပေါက်ကြီးထဲမှ ထိုးထွက်နေ သော ရော်ဘာလီးကြီးကို သေသေချာချာကိုင်ကြည့်ရင်း.. “မမထွေး..ဘယ်လိုလုပ်လဲ မသိဘူး.. ခြောက်ကပ်နေတာပဲ..” “အဲဒါ ကြီးက …ခြောက်ချင် ခြောက်မယ်…. ကြမ်းပေါ်မှာလည်း ကြည့်ပါဦး..ပုံနေတာပဲ…” မှန်ပါသည်…ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ သုတ်ရေ အဖတ် အဖတ်များ ပုံနေသည်။ ယုနွယ်က သူမ စောက်ဖုတ်လေးကို ခပ်ရွရွ လေးပွတ်ရင်း စောက်စိလေးကို ညစ်ပေးလိုက်ပြီး လီးနုတ်ခမ်း လေးကို လျှာဖြင့်ယှက် လိုက်သည်။ နောင်လတ် အပြင်မှ အခြေအနေကို ဘာမှ မမြင်ရဖြစ်နေပေရာ ရောဘာလီးကို ပြန်ထုတ်ပြီး သူ၏လီးကြီးကို ပြန်ပြီး စွပ်ထား လိုက်သည်..။ ယုနွယ်က လက်ဖဝါးလေး နုနုဖြင့် လီးကြီးကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ် လိုက်ရာ ထူး ထူးခြားခြား ပူနွေး နေပြီး စေးထန်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်..။
“မေခိုင်…ခ..ခဏ..လာအုံး..” ယုနွယ်က …လီးကြီးကို ခပ်တင်းတင် ဆုပ်ထားပြီး မေခိုင့်အား ခေါ်လိုက်သည်..။ လေသ့လေးဖြင့် အရေးတကြီး အမူအရာဖြင့် ခေါ်သဖြင့် မေခိုင် ကုတင်ပေါ်မှ လူးလဲထကာ…ယုနွယ်အနားသို့ တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်လာ၏။ “ဒါ ..ရော်ဘာလီးမဟုတ်ဖူး…တွေ့လား.. ကိုင်ကြည့်….” မေခိုင်နားဝသို့ ယုနွယ်က ကပ်ပြီး ပြောသည်။ မေခိုင်မျက်လုံးလေးပြူး သွား၏။ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းနှင့် သွေး ကြောကြီးများ ဖေါင်းကားနေကာ.. ဒစ်ကြီးပြဲလန်နေသော လီးအစစ်ကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရ၏။ “အသာနေ..” ယုနွယ်က..လီးထိပ်ကို လျှာဖျားလေးဖြင့် တစ်ချက်ယက်လိုက်၏။ လီးကြီးဒ ဆတ်ကနဲ.. ဆတ်ကနဲ..တုန်ခါသွား၏။ နီစွေး ဝင်းလက်နေသော နှုတ်ခမ်းလေး နှစ်မွှာဖြင့် လီးဒစ်ကြီးကို အာငွေ့နွေးနွေးလေးဖြင့် ငုံခဲ ပြီး ပြွတ်ကနဲ စုပ်ပေး လိုက်ရာ..လီးကြီးမှာ…သိမ့်သိမ့်ခါပြီး..လီးထိပ်ကြီး အရောင်လက်သွားအောင် တင်းတောင် သွားသည်ကိုတွေ့ လိုက်ရလေသည်..။ မေခိုင်က …ဘယ်နှယ့်လဲ..ဟူသော သဘောနှင့် မေးစေ့လေးဆတ်ပြီး မျက်ခုံးပင့်ပြီး မေးဟန် ပြုသည်..။ ယုနွယ်က လက်ဝါးကလေး ကာပြပြီး..လီးကြီးကို အဆုံးထိငုံခဲကာ လျှာအပြားလိုက်..စုပ်ယူပြီး လီး အရင်းထိ ပါးစပ်ကို ဆောင့်ချ ကာ… အပေါ်သို့ အားသန်သန်လေး စုပ်ယူပြစ်လိုက်လေသည်။
ထိုအခါ လီကြီး မှာ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြင့် ဟန်မဆောင်နိင်တော့ပဲ…သိသိသာသာကြီး.. ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ ထောင်သွားလေတော့ သည်.။ စိတ်ချရလောက်အောင် စမ်းသပ်ပြီးနောက် …ယုနွယ်က ဘီဒို တံခါးကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲဖွင့်လိုက်လေသည်။ “ဟင်…ရှင်… ရှင်…ကိုနောင်လတ်..” မိန်းကလေးနှစ်ဦးမှာ..ထိတ်လန့်အံ့သြောစွာ ရေရွတ်မိလိုက်ကြလေသည်။ နောင်လတ်မှ ဘီဒိုတံခါးဖွင့် လိုက် သည် နှင့် ပေါက်ဝိုင်းလေး အတွင်းမှ လီးကြီးကျွတ်ခါ..ဘီဒိုအတွင်း ၌ လီးကြီး မတ်တောင်လျက်သား မိသွား လေသည်။ “ရှင်…တော်တော်..အကျင့်ယုတ်ပါလား.. ဟင်.. ကျမတို့.. ရပ်ကွက်ကို အော်လိုက်ရမလား…ပြော..” “မ..မ..လုပ်ပါနဲ့ မေခိုင် ရယ်..ကိုယ်.. မင်းဆီကို လာတာပါ.. ဟိုတစ်ယောက်ဝင်လာလို့.. လန့်ပြီး ဒီအထဲ ဝင်နေမိတာပါ..” “အော်..ဒါနဲ့ပဲ …ထွေးကို ရှင်လုပ် လိုက်ရပြီး…ကျမတို့ကိုပါ…” “ကိုယ်…ကိုယ်ပြောပါရစေ …မေခိုင်..” “ထွက်…အခုထွက်ခဲ့…ရှင်လူယုတ်မာ…” “ကိုယ်…မေခိုင့်ကို ချစ်လွန်းလို့..” “တော်စမ်းပါရှင်…ရှင်..ဆူဆူညံညံဖြစ်သွားမှာကို လိုလားသလား…ကိုနောင်လတ်..” “ဟာ…မလိုလားပါဘူး ဗျာ..” “ဒါဆို…ကျမတို့ခိုင်းတာ…ရှင်..လုပ်ပေးရမယ်…” “လုပ်ပါ့မယ်….လုပ်ပါ့မယ်…မေခိုင်.. ကြိုက်တာခိုင်းပါ…”
မေခိုင်က… ဟန်ဆောင်ပြုံးလေး ပြုံးလိုက်ပြီး…ယုနွယ်ကို မျက်စောင်းလေးထိုး၍ ကြည့်လိုက်သည်…ယုနွယ်က ခိုင်း ပစ်ဆိုသော အဓိပ္ပါယ်နှင့် အံကြိတ်ခါ မေးငေါ့ပြလိုက်သည်။ မေခိုင်က သေပေတော့.. အမူယားလေးဖြင့် အံလေး ကြိတ် နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ခါ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်၏။ ဝင်းလက် ကျစ်လစ်သော ခါ အ ထက် ဆီမှ မာတောင်လျက်ရှိသည့် နိ့လေးနှစ်လုံးမှာ တုန်ခါသွား သည်။ ဖေါင်းကားနေသည့် စောက်ဖုတ် အထက် ပိုင်းလေးက အကွဲကြောင်းလေးကို မမြင်ရသေးဘဲ တစ်ရစ်တင်းပြောင် နေသည်…။ ပြန့်ကား ကြီးမားသော ပေါင် လုံးကြီးများက စောက်ဖုတ်ကလေးကို ညှပ်ထားသလို ပျောက်ကွယ်နေသည်။
နောင်လတ်..ပုခုန်းကြီးကို..မေခိုင်က အသာအယာကလေး ကိုင်လိုက်သည်။ စူးလက်သော မျက်ဝန်းကလေးများ က နောင်လတ် မျက်လုံးများကို ပူလောင်သော အာသာ ဆန္ဒများနှင့် စူးစိုက်ကြည့်နေသည်။ နောင်လတ်က ဝန်း ဝိုင်း နက်မှောင်သော မေခိုင့် မျက်ဝန်းများကို စူးစိုက်ခါကြည့်ရင်း မျက်နှာနှစ်ခု နီးကပ်လာသည်။ တစ်ယောက် ထွက်သက်ကို တစ်ယောက် ရှုရှိုက်မိလာသည်။ မေခိုင် အသက်ရှုသံလေး ပြင်းလာသည်။ ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ဆတ်ဆတ်ခါနေသော နောင်လတ် လီးကြီးက မေခိုင်၏ ဝမ်းဗိုက် သား ဖွေးဖွေးလေးကို တိုး ထောက်မိနေ၏။ ပူပူနွေးနွေး လီးထိပ်ကြီးက မေခိုင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို ကျင်စက်နှင့် တို့လိုက်သလို…တုန် တက်သွာ စေပြီး..ချွဲကျိနေသော လီးထိပ်ကြီးနှင့်..မိမိဗိုက်သားလေးများ ပူးကပ်သွားသည်အထိ နောင်လတ် ရင်ခွင် အတွင်း သို့ ပူးကပ် တိုးဝင်းမိလိုက်လေသည်။
ယုနွယ်က မေခိုင်နှင့် နောင်လတ် နှစ်ယောက်တို့၏ အပြင်းအထန် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပုံကို ဘေးမှကြည့်ကာ စောက်ပတ် အကွဲ ကြောင်းလေးကို လက်ခလယ်ဖြင့် မျှင်းမျှင်းဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေမိလေသည်။ နောင်လတ် က မေခိုင်၏ နုတ်ခမ်းလေးများကို မထိတထိလေး ငုံစုပ်ပြီး လျာဖျားလေးဖြင့် မေခိုင့် ပါးစပ်ထဲသို့ထိုးသွင်း ကလိ ပေးလိုကလေသည်း။ မေခိုင် မျက်တောင်ကလေး များ မှေးစင်းကာ မျက်လုံးလေး စုံမှိတ်ကျသွားသည်။ နောင်လတ် လက်တစ်ဖက်က မေခိုင့်နိ့လေးတစ်လုံးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ နိ့သီး ခေါင်းလေးကို ပွတ်ချေပေးလိုက်၏။ မေ ခိုင် …အင့်…အင့်…ကနဲ…ခန္ဒာကိုယ်ကလေး ကော့ပျံတက်သွားရသည်။ မေခိုင့် လက် ကလေးတစ်ဖက် က လည်း နောင်လတ် လီးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ပွတ်ချေနေမိသည်။ ပြင်းပြသော အသက် ရှုသံများက လွတ်လပ်ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ မေခိုင်က ကုတင်စွန်းတွင် နွမ်းလျှစွာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ နောင်လတ်က ဒူးထောက်ပြီး မေခိုင့် နိ့လေးနှစ်လုံးကို ခပ်ဖွဖွလေး စို့ပေးနေရာ မေခိုင့် မျက်နာလေးမှ ..မုန်တိုင်းမိသော ဌက်ငယ် လေးပမာ ဘယ်ညာ ခါရမ်းပြီး “အား…အ…ဟင်း…ကျွတ်ကျွတ်…” အလွန်အမင်း ခံရခက်စွာ ငြီးငြူလိုက်ရှာလေသည်။ မေခိုင့် လက်နှစ်ဖက်က ကုတင်ပေါ်သို့ နောက်ပြန်ထောက် ထားပြီး..ရင်လေးကို ကော့ပေးထားရှာသည်။ ဆံနွယ် မှောင်မှောင်လေးများက လေထဲ၌ ဝေ့ဝဲ လွင့်ပျံတက်နေ၏။ ခပ်ပြဲပြဲလေး ကားပေးထားသော ပေါင်နှစ်ဖက်ကို နောင်လတ်က အားပြုကိုင်ရင်း ပွတ်သပ် ပေးသည်။
တဖျင်းဖျင်း နှင့် သွေးကြွလာသော ကာမဆန္ဒက ချော်ရည် အပြည့်နှင့် မီးတောင်ကြီး မပေါက်ကွဲခင် ငလျင်ခါသည်နှင့် သွက် သွက် ခါလာလေသည်။ မေခိုင်က ကုတင်ပေါ်၌ မေးလေးကား ခေါင်းလေးမော့၍ လက်နှစ်ဖက် နောက်ပစ်ထုင် ထားသည်။ နောင်လတ်က ဒူးထောက်ခါ မေခိုင်ပေါင်ရင်းလေးကို ခပ်တင်းတင်း နိ့အစုံကို စုပ်ပေနေသည်။ နောင်လတ် ပေါင်ကြားသို့ ယုနွယ်က ပက်လက် ကလေးလှန်ကာ လှဲလျောင်းလိုက်ရာ နောင်လတ်လီးကြီးနှင့် ယုနွယ် နှုတ်ခမ်းလေးမှာ တေ့မိသွားကြလေသည်။ သုံးယောက်စလုံး မှာ ..ကာမစပ်ယှက်မှုအတွေ့အကြုံရှိကြသူများ မဟုတ်သောလည်း..ကြည့်ဖူးသော ဗီဒီယိုကား နှင့် ကြားဖူးနားဝများအတိုင်း စည်း ကိုက် ဝါးကိုက် စနှစ်တကျ ပြုလုပ်နေမိကြလေသည်။ ယုနွယ်က မိမိပေါင်ကြား သို့ ခေါင်းထိုးဝင်လာသည်နှင့် နောင်လတ်က ..ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားလေးလိုက်သည်။ ပူနွေးသော အာငွေ့နွေး နွေး ဖြင့် စုပ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသော နောင်လတ်အတွက်..ပါးစပ် လေးထဲသို့ မသိမသာလေး ညှောင့်လိုး လိုက်မိ လေသည်။
ယုနွယ်ကလည်း..နောင်လတ် ဂွေးဥကြီးကို ခပ်ညစ်ညစ်ကလေး ဆုပ်ချေပေးရင်း..လီးဒစ်ကြီး ကို သကြားလုံးစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးလိုက်သည်။ နောင်လတ်လီးမှာ တင်းသည်ထက် တင်း တောင်သည် ထက်တောင်လာလေသည်။ သွေးကြော ကြီးများ ပေါက်ကွဲတော့ မယောင် ဖေါင်းကားလာသည်။ သွေးတိုးခြင်း ကြောင့် လီးထိပ်ကြီးမှာ ကြီးမားသော ခရမ်းချဉ်သီးကြီးအလား..ပြာလဲ့သော မီးရောင်တွင် ပြောင်လက်တင်းမာ သွားသည်ကို တွေ့ရ၏။ နောင်လတ်လီးကို ပက်လက်လှန်က အားရပါးရ စုပ်နေသော ယုနွယ် စောက်ဖုတ်လေးမှာ ခံချင်လွန်းသဖြင့် အရေ လေးများစိုရွှဲနေသည်။ စောက်စိလေး မပြုတပြူဖြစ်လာသည် အထိ စောက်ပတ် နှစ်ခြမ်းကြားမှ စောက်စိလေးက ထောင်၍ ထွက်လာသည်။ ပါးစပ်နှင့်အပြည့်..ကြီးမားလွန်းသော နောင်လတ် လီးကြီးကို မိမိစောက်ဖုတ်ထဲသို့ လိုးသွင်းခြင်း ခံလိုသည်မှာ မ ထိန်းနိင်အောင် ဖြစ်လာနေရသည်။ ထို့ကြောင့် မရှက်နိင်တော့ပဲ နောင်လတ် ပေါင်ကြားမှ ခေါင်းပိုင်းကို ပြန်ထွက်ခါ..ခြေနှစ်ချောင်းကို သွင်းလိုက်၏။ ခြေနှစ်ချောင်းက မေခိုင့်ပေါင်ပေါ်သို့ တင် လိုက်ခါ..ဇောက်ထိုးလေးဖြစ်သည် အထိ ကော့ထောင်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါ…ယုနွယ် စောက်ဖုတ်လေးမှာ နောင်လတ်လီးကြီး ရှေ့၌ အလိုးခံရန် ဇောက်ထိုးလေး.. ခပ်ပြဲပြဲ နေရချပြီး ဖြစ်သွား၏။
နောင်လတ်ကလည်း ယုနွယ်ဆန္ဒကို သဘောပေါက်သဖြင့်..မေ ခိုင့်နိ့လေးများကို စို့ပေးနေရာမှ..ခဏ အနားယူပြီး ယုနွယ်စောက် ဖုတ်ကြီးကို ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ မေခိုင်က နောင်လတ် လီးကြီးကို အရင်းမှကိုင်ပြီး ယုနွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲ တေ့သွင်းပြီး. . စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန် မွှေပေး လိုက်ရာ..မေခိုင် အပြုအမူကြောင့်… နောင်လတ်နှင့် ယုနွယ်မှာ ထွန့်ထွန့်လူးသွားရ လေသည်။ “ဟာ… ဟား…အီး…အ…အမလေး…အို…အိုး…အီး…” ယုနွယ်အော်သံလေးက အတန်ငယ် ကျယ်လောင်သည်မို့ မေခိုင်က ရှူးကနဲ သတိပေးလိုက်ရလေသည်။ သို့ သော် ယုနွယ်က ကြားဟန်မတူ..ချေ..မြွေမလေး မီးမြိုက်ခံရသည့်နှယ် တွန့်လိမ်ကွေ့ကောက် သွား လေသည်။ “ရှူး…တိုးတိုး…ယုနွယ်…” “အာဟာ…အီး…အဟင့်..မရဘူး…မရဘူး…အမလေး..” “ဟာ…ပြသနာပဲ..” မေခိုင်က မသိမသာ ပြုံးရင်း..ငြီးတွားကာ နောင်လတ်လီးကြီးကို ယုနွယ် စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးထိ ဝင်စေရန် နောင်လတ်ခါးကို ဖက်၍ တ အားပြစ်ဆောင့်ချလိုက် လေတော့သည်။
“ပြွတ်…ပြစ်…ပြွတ်…ပြွတ်…စွတ်…စွတ်…ဘွတ်..” စောက်ခေါင်းက ထောင်နေသဖြင့် လီးကြီးက ကော်ပြီး ဝင်နေရသဖြင့်..တဖက် သပ်ပွတ်တိုက်ပေးသလိုကြီးဖြစ်ကာ တင်းထောင်နေသော ယနွယ်စောက်စိလေးနှင့်.. နောင်လတ်ဂွေးဥကြီးတို့က အရှိန်ပြင်းစွာ ခု လုတ်တိုက်မိနေကြ တော့သည်။ ယုနွယ်မှာ ကြမ်းပြင်ကို ကျားသစ်မလေး သဖွယ် ကုတ်ခြစ်..ရင်း တအားအား အော်ချလိုက်မိရှာ လေ သည်။ “နာ ..နာလေးဆောင့်ပေး…ကိုနောင်…သူပြီးတော့မယ်…” “အ..အ..အင့်…အင့်….အင်..” “ပြွတ်..ပြွတ်..ဖွတ်…ပြွတ်… ဘွပ်..ဘွတ်…” “အရေတွေ…တ..တအားထွက်တာပဲ…အိ” “မနားနဲ့ ကိုနောင်..မြည်ပေ့စေ…နာနာလေး.. ဆောင့်…ဆောင့်..” စောက်ခေါင်းအတွင်း အရှိန်နှင့် စိုက်စိုက်ဝင်သွားတေသာ လီးကြီးအရှိန်က ယုနွယ်အေား..ဖိန့်ဖိန့်တုန်သွားစေ ကာ ပြွတ်ကနဲ… ပြွတ်ကနဲ…သုတ်ရေများ ပန်းထွက်သွားရရှာသည်။
“ကိုနောင် ဟာကြီးက…မပျော့သေးဘူးနော်…” ယုနွယ် စောက်ဖုတ်ထဲမှ.. ပြွတ်ကနဲ ထွက်လာသော လီးကြီးကို..မေခိုင်က ပေါင် လေးကားပြီး.. ဒါရိုက်ဆက်သွင်း ရင်း ပြောလိုက်သည်။ ယုနွယ် သုတ်ရေများဖြင့်..ချွဲပြောင်လက်နေသော..နောင်လတ်လီးကြီးက မာန်မကျပဲ ..မေ ခိုင်၏ လှပဖေါင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ ထိုးဝင်သွားလေတော့သည်…။ “ပြွတ်..ဘွတ်…” “အမ လေး…ကိုနောင်…ဖြေးဖြေး…ကြပ်.. ကြပ်တယ်..” “နဲနဲ…ဖြဲ..ဖြဲပေးထားလေ…မေခိုင်…အင့်…အင့်..” “ရှီး….အ..ကြပ်လိုက်တာ… ကိုနောင်ရယ်… စောက်ခေါင်းထဲကို ပြည့်သွားတာပဲကွယ်…အင့်…အဟင့်…” “ခါးကော့ပေးထား…မေခိုင်…အင့်….အင့်..” “အား… ကိုနောင်…အီး…သားအိမ်ကို ထောက်မိနေပြီ…အ….အ…အင့်.” မေခိုင့် အံကြိတ်ငြီးသံလေးက ညဥ့်ယံကို ထွက်ဖေါက်ပျံ့လွင့်သွား လေတော့သည်…။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged တျောတျောကဲတဲ့ မျောဒယျဂဲလျ